7 July, 1962 မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ ~ Nge Naing
7 July, 1962 မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ
Saturday, July 07, 2012 Nge Naing 103 comments
7 July ဆိုတာ အရင်က တခါမှ မကြားဖူးလို့7July အကြောင်းကိုလည်း ဘာဆိုဘာမှ မသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်မ လူမဖြစ်ခင် ဆယ်စုနှစ်တခုစာနီးပါးခန့်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ဆိုပေမဲ့ ဒီနေ့အကြောင်းကို စသိလိုက်ရတဲ့နေ့ကစပြီး ဒီနေ့မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ဒီနေ့မှာ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ခဲ့သူ တယောက်လို ကျွန်မ ခံစားရပါတယ်။ ၁၉၈၈ ကျွန်မ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ဆယ်တန်းတက်နေချိန် စာမေးပွဲမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်ဖို့အတွက် ကျောင်းစာကလွဲပြီး တခြား ဘာကိုမှစိတ်မ၀င်စားပဲ စာကိုပဲ တကုတ်ကုတ် ကြိုစားနေတဲ့အချိန်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းမသိ စိတ်ဝင်စားရကောင်းမှန်းလည်း မသိတဲ့အချိန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကျွန်မ စာတစောင်ကို ကိုဖတ်ရပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှ စပါးကျီနိုင်ငံတခု အဖြစ်ကနေ တိုင်းပြည်ကို ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံစာရင်းဝင်ဖြစ်စေတဲ့အထိ ဆိုးရွားစေခဲ့တဲ့ ၂၆ နှစ်ကြာ တပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကို အဆုံးသတ်ဖို့ တာဝန်ဟာ ငါတို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ ပုခုံးပေါ်မှာ ရောက်နေပါပြီဆိုတာနဲ့ အစချီရေးထားတဲ့ အဲဒီအချိန်က ဗကသ ဥက္ကဌ ကိုမင်းကိုနိုင် လက်ရေးနဲ့ ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ လက်ကမ်းစာထဲမှာ7July ဆိုတာ စတွေ့ဖူး ကြားဖူးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ စစ်အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်းက တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျမှာစိုးလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆီကနေ အာဏာဓါးမြတိုက်ယူ လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပထမဦးဆုံး စတင်တော်လှန်ခဲ့သူတွေက ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရပါတယ်။ ဦးန၀င်းဟာ အခု ၂၀၁၀ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဦးသန်းရွှေတို့ လုပ်သလိုပဲ ၇၄ ဥပဒေကို သူ့သဘောနဲ့သူရေးဆွဲပြီး သူ့သဘာနဲ့သူ အတည်ပြုကာ ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ထူထောင်ပေးမယ်လို့ လိမ်ပြီး တပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာလိုက်တာ၂၆ နှစ်အကြာမှာ တိုင်းပြည်က ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်းဝင် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။7July မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေက စတင်ဆန့်ကျင်လို့ ကျောင်းသားမြောက်များစွာကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ လက်ထက်ကတည်းက လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်ဦးကြီးကိုလည်း ဖေါက်ခွဲပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာ အရင်က တခါမှ မကြားဖူးတာတွေကို ၈၈ သြဂုတ်လမှာမှ ကျွန်မ ကြားသိလိုက်ရပါတယ်။7July ဆိုတာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ပထဦးဆုံး စတင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲရဲ့ မြစ်ဖျားခံတဲ့နေ့ တနည်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကို စတင်တဲ့နေ့လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။7July အကြောင်းကို စသိခဲ့တဲ့ နေ့ကစပြီး မြန်မာပြည်က စာသင်ခန်းကို ကျွန်မ စွန့်ခဲ့ပြီး စာသင်ခန်းထဲ ပြန်မရောက်တော့တာ အခုထိပါပဲ။
7 July ကို မမေ့ကြနဲ့လို့ သွေးနဲ့ရေးပြီး အသက်စတေးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတို့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့7July မှာ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်မမီလိုက်တဲ့ သမိုင်းတွေကို သိတဲ့သူတွေ တင်ထားတဲ့နေရာက ပြန်ကူးပြီး စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ လာပေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွထဲမှာလည်း 7, July 1962 တုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေကို Link အတိအကျနဲ့ လာထည့်ပေးထားသူတွေ ရှိတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအနေနဲ့ Comment ထဲမှာပါ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ (ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်ဦး ပုံကို ကိုနစ်နေမန်း ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။)
ဒေါင်းတမန်ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူထားတဲ့ တက္ကသိုလ် တို့ကျောင်းတနေရာ သီချင်း
ABFSU+-+Track+6 by myomyintcho
ကိုလူထွေးရဲ့ သွေးထွက်သံယို ဘလော့ဂါ စစ်ဆင်ရေးမှ ကူးယူဖေါ်ပြချက်
ဤ "ဇူလိုင် သမိုင်းဝင် ပြကွက် ဓာတ်ပုံများ" ကို ထုတ်ဖော် တင်ပြရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျောင်းသားထု၏ အခွင့်အရေး တိုက်ပွဲတွင် တတပ်တအား အနေဖြင့် သမိုင်းဝင် ပစ္စည်းတရပ်ကို ထုတ်ဖော် တင်ပြခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဤစာအုပ်တွင် ပါဝင်သည့် ဇူလိုင် သမိုင်းဝင် ဖြစ်ရပ် ဓာတ်ပုံများသည် ယုတ်မာရက်စက်မှု၏ တစိတ်တပိုင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဇူလိုင် (၇) နေ့ ရက်စက်မှုကြီးကြောင့် တိုင်းပြည်နှင့် ကမ္ဘာအဝှမ်း မိဘ ပြည်သူ လူထုတရပ်လုံးမှာ စိတ်ဝမ်းမကြည်မသာ ဖြစ်ခဲ့ကြရပါသည်၊ မည်သို့မျှ ဖျောက်ဖျက် ရနိုင်တော့မည် မဟုတ်သည့် တော်လှန်ရေးအမည်ခံ လူသတ်အစိုးရ၏ မဟာအမှားကြီးပင် ဖြစ်ပေသည်။
ဤ တော်လှန်ရေး အမည်ခံ စစ်အစိုးရသည် အမှားပေါ်အမှား ဆင့်၍ ကျူးလွန်သည်ထက် ကျူးလွန်နေချေပြီ။ ကျဆုံးနေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောင်းသား အခွင့်အရေးများ အတွက် ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ဝင်ရန်မှာ ကျောင်းသား ရဲဘော် အပေါင်း၏ အဓိက တာဝန် ဖြစ်ပေသည်။ ကျဆုံးရှာလေသူ ကျောင်းသား ရဲဘော်များကို သစ္စာရှိသော အားဖြင့် ညီညွတ်စွာ တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်ကြရန် နှိုးဆော်လိုက်ရပေသည်။
အောက်တိုဘာ တလ ပိတ်ခြင်းသည် ညီညွတ်မှု၏ သရုပ်ပြ အောင်ပွဲပင် ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်း သွေးစည်း ညီညွတ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သထုံဆောင် အနေဖြင့် ပါတီနိုင်ငံရေး မစွက်ဖက်သော ကျောင်းသားအသိ ကျောင်းသားအမြင်ဖြင့် ကျောင်းသားအရေးကို ရဲရဲဝန့်ဝန့် ကျောင်းသားထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်းလက်တွဲ တိုက်ပွဲဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက် တင်ပြ အစီရင် ခံပါသည်။
ကျဆုံးသူ အပေါင်းအား ဦးညွှတ်ပါ၏။
သဟာယနှင့် စာဘတ်အသင်း (၁၉၆၃...၆၄)
ရင်အုံ အိုးထိန်း စက်သို့တည်း။ ။
-၇-၆၂ နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီအချိန်တွင် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သော ကျောင်းဆောင် စည်းကမ်းဆိုးများကို တ-က-သ မှ ဦးဆောင်၍ ဤသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြကြသည်
၇-၇-၆၂ ဘွဲ့နှင်းသဘင်မှ အဓိပတိ လမ်းမအတိုင်း တက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင် ဤသို့ အေးအေးချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြကြသည်
၇-၇-၆၂ အေးချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသူများကို ဤသို့ နံပါတ်တုတ် ကိုင်ရဲသားများနှင့် မတရား နှိပ်ကွပ်သည်။ ဦးဆောင်သူ တ-က-သ မှ ရဲဘော်ကျောင်းသားအများကိုလည်း ဖမ်းဆီး သွားကြသေးသည်။
၇-၇-၆၂ မျက်ရည်ယို ဗုံးများကို သုံး၍ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းသည်အထိ ယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းလာကြသည်။ အဓိပတိလမ်း ရေတမာတန်းအောက်ဝယ် ဤသို့ နေရာယူ တပ်ဆွဲလျက် ပစ်ကြခတ်ကြသည်။
၇-၇-၆၂ အဓိပတိဘက်မှ ကျောင်းသာထု မခံနိုင်၍ ခဲနှင့်ပေါက်ကာ ပုလိပ်များနှင့် ရုံးရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ကြရတော့သည်။
၇-၇-၆၂ နေ့က မန္တလေးဆောင်ဘက်မှ ကျောင်းသားထုကလည်း မခံနိုင်လွန်း၍ ဤသို့ လက်သီးလက်မောင်းတန်းကာ ဆန္ဒပြကြသည်။
၇-၇-၆၂ နေ့က လက်နက်မပါဘဲ အေးချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသော ကျောင်းသားထုကို ရန်သူ့နယ်မြေသဖွယ် စစ်သားများ ဤသို့ ဝိုင်းဝန်း ပစ်ခတ်ကြသည်။
၈-၇-၆၂ နေ့က ကျဆုံးရှာလေသူ ရဲဘော်အချို့မှာ ဤသို့ တိတ်တဆိတ် သုဿာန်ပို့ မြေမြုပ် သဂြိုဟ် ခံခဲ့ရရှာလေသည်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းတော်ကြီးကိုလည်း ရက်အကန်းအသတ်မရှိ ပိတ်လိုက်ကြသည်။
၂၁-၁၁-၆၂ တက္ကသိုလ်ကြီးကို ရက်ပေါင်း ၄၁ ကျော် ပိတ်ပြီး ကျောင်းပြန်အဖွင့်၊ ၂၁-၁၁-၆၂ အမျိုးသားနေ့တွင် ကျောင်းသားထု ဆန္ဒပြမည်ကိုသိ၍၊ စစ်ဗိုလ်ကြီးများ၏ အမိန့်ဖြင့် ဆရာများက စတုဒီသာ ကျွေးမွေးကျင်းပသည်။ ကျောင်းသားထုက "အမျိုးသားနေ့နဲ့ စတုဒီသာ ရီစရာဗျာ ဘာလုပ်တာလဲ" ဟူသည့် ဒိုးပတ်သံချပ်များဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင်း လှည့်လည်ဆန္ဒပြကြသည်။
၂၁-၁၂-၆၂ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သော ကျောင်းဆောင် စည်းကမ်းဆိုးများအတွက် ၇-၁၂-၆၂ နေ့၊ ၅ လမြောက် ၇ ဇူလိုင်ညတွင် အဆောင်မှထွက်၍ ဆန္ဒပြကြပြီးနောက် ၂၀-၁၂-၆၂ အောင်ကျော်နေ့တွင် ဤသို့ခန်းနားကြီးကျယ်စွာ စည်းစည်းလုံးလုံးစုဝေး၍ အောင်ကျော်နေ့ အခန်းအနားကို စုပေါင်းကျင်းပကြသည်။
၈-၇-၆၂ သားငယ်များကို ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ် သွားကြသည့်အတွက် မချိတင်ကဲ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာဖြင့် ရှိနေရှာသည့် မော်ကွန်းဝင် မိခင် တကသ အဆောက်အဦကြီး ကို ၈-၇-၆၂ နံနက် ၆ နာရီခန့်ထိ တွေ့မြင်နိုင်သေးသည်။
၈-၇-၆၂နေ့က ကျောင်းသားထုတရာကျော်အောင် သတ်ရုံဖြင့်် အားမရနိုင်သေးဘဲ... ကျောင်းသားထု မှီခိုအားထားရာ ဗမာ့မော်ကွန်းဝင် မိခင် တ-က-သ အဆောက်အဦကြီးကို ၈-၇-၆၂ နံနက် ၆ နာရီတွင် ယမ်းဗုံးများဖြင့် ဖြိုခွဲ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကြသည်။ အောင်ကျော် ကျောက်တိုင်မှာ မျက်နှာငယ်စွာ အထည်းကျန် ရပ်တည်ခဲ့ရရှာသည်။
ဝင်းမြင့်ထွန်း (ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်)
မြတ်လေးငုံ ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြချက်
လက်သီးဆုပ်လျက် ၊ ကြွေးကြော်တက်ရင်း
ကျဆုံးသွားသည့်၊ ကျောင်းသားလူရွယ် ရဲဘက်များ ...
စွန်းထင်းကွက်အိုင် ၊ လမ်းအပြည့်
သူတို့ ဖျက်၍ ၊ ပျက်ပြီတကား
ထိစင်ရဲစက် တို့ သွေးကွက်မူ
(၁၉၆၂ ခုနှစ် ကျောင်းသားဟောင်းများကနေ ခံစားရေးဖွဲ့ ခဲ့ကြမှုများထဲမှ အချို့ အား ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်)။
from Maya Magazine by Maung Aye Win
"ဘယ်လိုလဲဗျ ကိုခင်ညို"စိုးလွင်က မျက်နှာသေလေးနှင့် မေးသည်။
"အေးကွာ၊ ငါ့တပည့်တွေက နားလည်မှု ရှိပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းထဲမှာဘဲ စနစ်တကျ လုပ်ကြစမ်းပါ"ဆရာဦးစံထွန်းက သူ့စကားနားထောင်သော ကျောင်းသားများအတွက် ကျေနပ်သွားဟန်၊ နှစ်နှစ်ကာ ကာ ပြုံးရင်း ပြောသည်။ ကျောင်းသားအားလုံး ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို ပြန်ပြီး မျက်နှာမူလိုက်ကြသည်။
မကြာလှပါ။ ဗုံးမိုးသည်းထန်စွာ ရွာပါတော့သည်။
ခင်ညိုတို့လည်း ခုမှပင် ရေစိုအ၀တ်၏ တန်ဘိုးကို နားလည်တော့၏။ ဗုံးလုံးတွေက သိပ်ပြီး အရှိန်ပြင်းလှသည် မဟုတ်သောကြောင့် အဂျလာတို့ အုပ်စုက ကလို့ ခုန်လို့ပင် ဗုံးကို ရှောင်သည်။ အနီးအနားလာကျလျှင် ပြန်ကောက်ပြီး ပစ်လိုက်သေးသည်။
ထိုစဉ်တွင် ကျောင်းသားတစုသည် ဆရာကာ အိမ်တွင်းမှ ဗော့က်စ်ဝဂ်ဂွန်ကား အနီရဲရဲလေးတစင်းကို တွန်းလာကြ၏။ ဘွဲ့နှင်းသဘင် တံခါးမကြီးအထိ။ တံခါးမကြီးရှေ့အရောက်တွင် ကားကို ပက်လက်လှန်လိုက်ကြ၏။ ပြီးတော့ မီးရှို့ပစ်လိုက်ကြ၏။
အော် သွေးဆူနေကြချိန်တကား။ဒါနှင့် မနားသေးပေ။ နောက်ထပ် ကျောင်းသားတစုက ကားပြာလေးတစီး ထုတ်လာပြန်သည်။ သည်လိုပင် အိမ်ရှေ့အရောက် လှန်ပြီး မီးရှို့လိုက်ကြပြန်သည်။
တောင်ဆီမှာတော့ မိုးတွေညို့လို့။ မိုးသေးမိုးဖွဲလေးတွေကလည်း လွမ်းလောက်စရာ။ မရဲတရဲ ရွာနေပြန်သည်။ ခင်ညို့ မျက်နှာပေါ်တွင် မိုးသီးလေးတွေ ကွက်ကျားစိုလျက် ရှိနေ၏။ မှောင်ရီပင် သန်းလာချေပြီ။
ချစ်ဆွေပြော၍ အားလုံး လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ ကျောင်းသားတယောက် ခါးတောင်း မြှောင်အောင် ကြိုက်ပြီး အုတ်ခုံမြင့်ပေါ်တွင် ထိုင်အော်နေသည်ကို တွေ့၏။ မကြာလိုက်ပါ။ခင်ညိုတို့တတွေ ခေါင်းပြန်မလှည့်မီမှာပင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးအတွက် အခြေအနေ အားလုံး ပြောင်းလဲစေလိုက်မည့် ပထမဆုံး သေနတ်သံကို ကြားလိုက်ရပေသည်။ ပြီးတော့ ဆက်၍ ဆက်၍။
သည်လိုနှင့်ပင် တည ချုပ်ခဲ့ရသည်။ နှစ်ရက်ဆက်ပြီး အသံပေါင်းစုံလျှံ ဂယက်ညံနေသော တက္ကသိုလ်ကြီးသည် ပကတိ ငြိမ်သက်သွားသည်။ ရေဒီယိုက တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ထားလိုက်ကြောင်း ကျေညာ လေသည်။ တညလုံး အိပ်မရသော အတွေးကြောင့် ခင်ညို တလူးလှိမ့်လှိမ့် ခံစားနေရသည်။ အိပ်ရေးပျက် မခံသော ၀င်းမောင်ကြီးပင် တလှုပ်လှုပ် ဖြစ်နေသည်။ နှစ်ယောက်သား အံကြိတ်ရင်း အတွေးကိုယ်စီနှင့် ငြိမ်နေမိကြသည်။ည ၂ နာရီထိ မီးဖွင့်ထားသော်လည်း သည့်နောက်တွင် မီးပိတ်ပြီး ဆိတ်ငြိမ်ခြင်း အာရုံကို ၀င်စား နေမိလိုက်သည်။ နက်ဖြန်ဆို အိမ်ပြန်ရတော့မည်။ ဘယ်အချိန် အိပ်ပျော်သွားသည်မသိ။ '၀ုန်း' ဆိုသော အသံကြီးနှင့်အတူ မြေတုန်ပြီး အဆောင်လှုပ်ခါ သွားတော့မှ ခင်ညို အိပ်ရာက နိုးတော့သည်။ နိုးသည်ဆိုတော့လည်း အဆောင်လှုပ်ခါမှု အရှိန်ကြောင့် ခင်ညိုတို့ နှစ်ယောက်လုံး ကုတင်အောက် ရောက်သွားသည်။
"အဆောင်ကြီး ပြိုပြီထင်တယ်ဗျ" "လာဗျာ၊ ခြေသံတွေလဲ ကြားတယ်၊ ထွက်ကြည့်ရအောင်"
တကသ အဆောက်အဦးကြီး မရှိတော့ပြီ။
ခင်ညို့ ရင်ထဲတွင် ဟာသွားတော့သည်။
ဟိုမှာ ကြည့်စမ်းဗျာ ဖုံငွေ့တွေပဲ ရှိတော့တယ်"
(စာမျက်နှာ ၂၇၀- ၂၇၇)အောင်ပြည့်' ရဲ့ 'ပြိုမှာလေားမိုးရဲ့' စာအုပ်မှ။
(12/07/10 11:52 မှာ တင်ခဲ့တဲ့ပို့စ်ကို ဒီနှစ်7July အမှတ်တရပို့စ်သီးသန့် မတင်နိုင်လို့ အပေါ်ခဏ ပြန်ဆွဲတင်ထားပါတယ်။)
7 July မှာ အသက်ပေးသွားသော သူရဲကောင်းများ ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ။
Posted in: ဂုဏ်ပြုအမှတ်တရ,ဓါတ်ပုံ,မှတ်တမ်း,မျှဝေခြင်း,သီချင်း
July 7, 2010 at 2:20 PM Reply
July 7, 2010 at 6:08 PM Reply
7 Jul 10, 11:05
ရန်ကုန်သူ: သမိုင်းကြောင်းတွေကို လုပ်ကြံပြီး လိုက်ရေးမနေပါနဲ့။ မိန်းမ သူရဲကောင်းကြီးဖြစ်ချင်နေတာလား။ မသိရင် မြို့ကြီး ပြကြီးက ကျောင်းသူလိုလိုနဲ့၊ ရွာမှာမွေးလို့တော်သေးတယ်။
7 Jul 10, 16:34
Nge Naing: ရန်ကုန်သူ ပြောပုံက မြို့ကြီးပြကြီးကလူတွေမှ သူရဲကောင်းဖြစ်လို့ ရသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရော ဦးသန့်ပါ နှစ်ယောက်စလုံးက ရန်ကုန်သားတွေ တယောက်မှ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မသိလို့ထင်တယ်။
7 Jul 10, 16:38
Nge Naing: ကျွန်မလုပ်ကြံရေးထားတာလား တကယ်ကြုံခဲ့သူတွေ ရေးဖွဲ့ထားတာကို ပြန်ဖေါ်ပြထားတာလား ဆိုတာသိအောင် တခေါက်ပြန်ဖတ်လိုက်ပါနော့်။
7 Jul 10, 17:37
Nyo: ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် အာဏာရှင်ကိုအန်တု ကာ ရဲဝံ့စွာ အသက်ပေးသွားကြသော သူရဲ ကောင်းအပေါင်းနှင့်
7 Jul 10, 17:38
Nyo: မြန်မာပြည်၏ အကျဉ်း ထောင်အသီးသီးတွင် မြန်မာပြည် စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြ သော သူရဲကောင်းအပေါင်းအား လေးစား ကြည်ညို ဂုဏ်ပြုစွာဖြင့်အလေးပြုပါသည်၊၊
7 Jul 10, 17:40
Nyo: ဖေါ်ပြပေးတဲ့အမကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊၊ အမအတွက်လည်း ဂုဏ်ယူပါတယ်၊၊
7 Jul 10, 18:07
Nge Naing: အစ်မ ပြန်ဖတ်လို့ရအောင် မှတ်တမ်းအနေနဲ့ ထည့်ထားချင်တာရော တခြားမသိသေးသူများအတွက် မျှဝေတဲ့ သဘောနဲ့ပါ တင်ထားတာပါ။ Appreciation အတွက် Nyo ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(ပို့စ်နဲ့ ဆိုင်နေလို့ C-Box ကကူးထည့်ထားပါတယ်။)
စစ်တပ်ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင်ပစ်တယ် (ဗွီဒီယို) says:
July 4, 2011 at 12:03 AM Reply
စစ်တပ်ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင်ပစ်တယ် (ဗွီဒီယို)
မြန်မာ့သတ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့ လူသတ်သြဝါဒ
("မြန်မာ့သတ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့ လူသတ်သြဝါဒ" ဖြစ်တဲ့ "စစ်တပ် ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင် ပစ်တယ်" ဆိုတာကို မြန်မာတွေ ကြားဖူးကြပေမယ့် အဲဒီလို ပြောတဲ့ "ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့ လူသတ်သြဝါဒ" ဗွီဒီယိုကို ကြည့်ဖူးသူဟာ အတော် နည်းပါတယ်။ ဒီသမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်းကို မကြည့်လိုက်ရ မရှိရလေအောင် "စစ်တပ် ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင် ပစ်တယ်" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
လက်နက်ကိုင်ရန်သူနဲ့ တွေ့ရင် ရေလို ကျင့်သုံးပြီး လက်နက်မဲ့ပြည်သူနဲ့တွေ့ရင် မီးလို ကျင့်သုံးကြ။ says:
July 4, 2011 at 12:04 AM Reply
ငါတို့ မြန်မာ့သတ်မတော်ဟာ လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို တဖက်သတ် ပစ်သတ်ရာမှာ အစဉ်အလာ ကြီးမားတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့မှာ စတင်ခဲ့ပြီး မကြာခဏ ဆိုသလို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဒီ တဖက်သတ် ပစ်သတ်မှု အစဉ်အလာကို ရဲဘော်တို့ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရမယ်။
တပ်မတော်ကို သတ်မတော်အဖြစ် အသွင်ပြောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ မြန်မာ့သတ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက ငါတို့ သတ်မတော်ရဲ့ တဖက်သတ် လူသတ်လမ်းစဉ်ကို အတိအကျ ချမှတ်ထားပြီး ဖြစ်တယ်။ လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို တဖက်သတ် ပစ်သတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါတို့ သတ်မတော်ရဲ့ သဘောထားကို မြန်မာ့သတ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား မိန့်ကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်။
ဆိုတဲ့ ငါတို့ မြန်မာ့သတ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း နေဝင်းရဲ့ လူသတ်သြဝါဒကို တဖက်သတ် လူသတ်မှု အစဉ်အလာ ကြီးမားတဲ့ ငါတို့ မြန်မာ့သတ်မတော်က ဆက်လက် ကျင့်သုံးသွားရမယ်။
လက်နက်ကိုင်ရန်သူနဲ့ တွေ့ရင် ရေလို ကျင့်သုံးပြီး လက်နက်မဲ့ပြည်သူနဲ့တွေ့ရင် မီးလို ကျင့်သုံးကြ။
(သတ်မတော် ဂေါ်ပြား ဖြစ်မှ တိုင်းပြည် ပေါက်တူး ဖြစ်မည်။)
၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့
("မြန်မာ့သတ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့ လူသတ်သြဝါဒ" ကို နားထောင်ရန် "လက်နက်ကိုင်ရန်သူနဲ့ တွေ့ရင် ရေလို ကျင့်သုံးပြီး လက်နက်မဲ့ပြည်သူနဲ့တွေ့ရင် မီးလို ကျင့်သုံးကြ" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။)
July 4, 2011 at 12:21 AM Reply
စီဘောက်က မှတ်ချက်လေးတွေ update ဖြစ်အောင် ထည့်ပေးပါအုံး
ရန်ကျန် တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၁) says:
ရန်ကျန် တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၁)
ဆောင်းပါးရှင် – ဗိုလ်ထက်မင်း
ကျောင်းသား ဆိုတာဟာ ပွင့်လင်း ရိုးသားပြီး ဖိနှိပ်မှု၊ မတရားမှုကို မကြိုက်တဲ့ သဘာဝ ရှိပါတယ်။ ခေတ်ပညာ တတ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ နဲ့ယှဉ်ကာ အမြင်ကျယ် အသိဥာဏ် ကြွယ်ဝသူတွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ နယ်ချဲ့ကိုလိုနီ လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ “အာဇာနည်သူရဲကောင်း” တွေဟာ ကျောင်းသားတွေက ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါလား ခင်ဗျား။ ကျောင်းသား သမဂ္ဂနဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ လွတ်လပ်ရေး ရရှိမှု ပြဿနာ၊ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး ပြဿနာ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာ၊ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ပြဿနာ စတာတွေကို အကြိတ်အနယ် ဖြေရှင်းတောင်းဆို ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ (၂) ရက်နေ့၊ ဗိုလ်နေ၀င်း အာဏာသိမ်း ပြီးတဲ့အခါ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ပထမဆုံး ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တာ ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ရန်ကျန် တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၂) says:
July 4, 2011 at 12:35 AM Reply
ရန်ကျန် တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၂)
အာဏာသိမ်းပြီးပြီးချင်း မတ်လ (၃) ရက်နေ့မှာ (ဗကသ)၊ (တကသ) နဲ့ (ရကသ) တို့ ပူးတွဲပြီး ကြေညာချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ကာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခြင်းကို ကန့်ကွက်လိုက် ကြပါတယ်။ ဖဆပလ၊ ပမညတ စတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေက စောင့်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ကျောင်းသားတွေက ပြတ်ပြတ်သားသား ကန့်ကွက်ခဲ့ကြလို့ ဗိုလ်နေ၀င်းက အာဃာတ တရား ထားခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးကို ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနက တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုဖို့ တော်လှန်ရေး ကောင်စီက မေလ (၉) ရက်နေ့မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေမှာ ပါတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အားလုံးကို တော်လှန်ရေး ကောင်စီက ကျင့်သုံးမှာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ကျောင်းသား တွေကို နှိပ်ကွပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ ကျောင်းဆောင် စည်းကမ်းချက် (၂၂) ချက်ကိုလည်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မေလ (၁၀) ရက်နေ့ တက္ကသိုလ် ကောင်စီဝင်တွေကို ဗိုလ်နေ၀င်းက ဒဂုံရိပ်သာ မှာ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး မူလတက္ကသိုလ် ကောင်စီကို ဖျက်သိမ်း လိုက်တဲ့ အကြောင်း ပြောဆို ကြေညာခဲ့လို့ ကျောင်းသားထုအတွင်း မကျေနပ်မှု ပိုမို များပြားခဲ့ပါတယ်။
မေလ (၂၇) ရက်နေ့ တက္ကသိုလ် ကောင်စီကို တော်လှန်ရေး ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်အမိန့်(၃၀) နဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ အခါမှာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေ မပါဝင်ဘဲ စစ်အာဏာရှင် အရာရှိကြီးတွေနဲ့သာ ဖွဲ့စည်းထားလို့ ကျောင်းသားများ ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ မေလ (၃၁) ရက်နေ့မှာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ပြေလည်မှုရှိတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာသာလှကို ရာထူးက ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ဆရာ သင်္ချာ ပါမောက္ခ ဦးကာ အား အစားထိုး ခန့်အပ်လိုက်ရာမှ အာဏာရှင်အစွယ် ဘီလူး ပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်။
ရန်ကျန် တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၃) says:
July 4, 2011 at 12:36 AM Reply
ရန်ကျန် တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၃)
အမှန်မှာ တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေအရ ပါမောက္ခချုပ် ရာထူး လစ်လပ်ရင် ပါမောက္ခတွေထဲက ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံ ခွင့်ရှိပြီး တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရ အသင်းဝင်တွေ လျှို့ဝှက် မဲပေးကာ ရွေးကောက် တင်မြောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေ ထုတ်ပြန်တဲ့ ပညာရေး စည်းကမ်းသစ် တွေဟာလည်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ များစွာပါရှိလို့ ကျောင်းသားတွေက ထောက်ပြပြီး ကန့်ကွက်မှု ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ တကသ အဖွဲ့မှ ပါမောက္ခချုပ်ရုံးကို တရားဝင် စာပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့ ပြန်ကြားမှု တစ်ခုမှ မရခဲ့လို့ အုပ်ချုပ်ရေး အပိုင်းနဲ့ ကျောင်းသားများ အကြား တင်းမာမှု ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။
တက္ကသိုလ် အဆောင်တံခါးတွေကို ည (၈) နာရီပိတ်မယ်၊ ဘယ်သူမှ အ၀င်အထွက် မလုပ်ရလို့ တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်လိုက်ပြန်ရာ ကျောင်းသားတွေဟာ ဒေါသ ထွက်ကုန်ကြပါတယ်။ ဂျူလိုင် (၄) ရက်နေ့ ည (၉) နာရီမှာတော့ အဆောင်နေ ကျောင်းသားတွေ ကြွေးကြော် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြကြပါတော့တယ်။ ဂျူလိုင်လ (၅) ရက်နေ့မှာ ကျောင်းသားတွေက ပါမောက္ခချုပ်နဲ့ တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ ပန်ကြားပေမဲ့ တွေ့ခွင့်မရတာကြောင့် အဆောင်တံခါးကို လူအင်အားနဲ့ တွန်းဖွင့်ပြီး လမ်းမတွေပေါ်ကို ထွက်လာကြပါတယ်။ ဂျူလိုင်လ (၆) ရက်နေ့မှာ တက္ကသိုလ် နယ်မြေကို ပုဒ်မ (၁၄၄) အမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
July 4, 2011 at 1:28 AM Reply
မေ့မရဘူး၊ ဒါကြောင့် အဝေးမှာနေတယ်။
မကျေနပ်ဘူး ၊ ဒါကြောင့် ကီးဘုတ်ဒေါသတွေ ပြတယ်။
ရှူးပေါက်မရဘူး ၊ ဒါကြောင့် ကြက်သီးတွေထတယ်။
အရီးဒေါ်ဘုံ အော်ရမည် ။
ပမာဏများလျှင် အိမ်တိုင်ယာရောက် လာယူမည် ။
လက်နက်ကိုင်ရန်သူနဲ့ တွေ့ရင် ရေလို ကျင့်သုံးပြီး လက်နက်မဲ့ပြည်သူနဲ့တွေ့ရင် မီးလို ကျင့်သုံးကြ says:
July 4, 2011 at 1:49 AM Reply
လက်နက်ကိုင်ရန်သူနဲ့ တွေ့ရင် ရေလို ကျင့်သုံးပြီး လက်နက်မဲ့ပြည်သူနဲ့တွေ့ရင် မီးလို ကျင့်သုံးကြ
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မိန့်ခွန်း says:
July 4, 2011 at 1:51 AM Reply
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၁) says:
July 4, 2011 at 1:54 AM Reply
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၁)
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၂) says:
July 4, 2011 at 1:55 AM Reply
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၂)
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၃) says:
July 4, 2011 at 1:58 AM Reply
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၃)
အမှန်မှာ တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေအရ ပါမောက္ခချုပ် ရာထူး လစ်လပ်ရင် ပါမောက္ခတွေထဲက ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံ ခွင့်ရှိပြီး တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရ အသင်းဝင်တွေ လျှို့ဝှက် မဲပေးကာ ရွေးကောက် တင်မြောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေ ထုတ်ပြန်တဲ့ ပညာရေး စည်းကမ်းသစ် တွေဟာလည်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ များစွာပါရှိလို့ ကျောင်းသားတွေက ထောက်ပြပြီး ကန့်ကွက်မှု ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ တကသ အဖွဲ့မှ ပါမောက္ခချုပ်ရုံးကို တရားဝင် စာပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့ ပြန်ကြားမှု တစ်ခုမှ မရခဲ့လို့ အုပ်ချုပ်ရေး အပိုင်းနဲ့ ကျောင်းသားများ အကြား တင်းမာမှု ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။
တက္ကသိုလ် အဆောင်တံခါးတွေကို ည (၈) နာရီပိတ်မယ်၊ ဘယ်သူမှ အ၀င်အထွက် မလုပ်ရလို့ တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်လိုက်ပြန်ရာ ကျောင်းသားတွေဟာ ဒေါသ ထွက်ကုန်ကြပါတယ်။
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၄) says:
July 4, 2011 at 2:00 AM Reply
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၄)
ဂျူလိုင် (၄) ရက်နေ့ ည (၉) နာရီမှာတော့ အဆောင်နေ ကျောင်းသားတွေ ကြွေးကြော် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြကြပါတော့တယ်။
ဂျူလိုင်လ (၅) ရက်နေ့မှာ ကျောင်းသားတွေက ပါမောက္ခချုပ်နဲ့ တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ ပန်ကြားပေမဲ့ တွေ့ခွင့်မရတာကြောင့် အဆောင်တံခါးကို လူအင်အားနဲ့ တွန်းဖွင့်ပြီး လမ်းမတွေပေါ်ကို ထွက်လာကြပါတယ်။
ဂျူလိုင်လ (၆) ရက်နေ့မှာ တက္ကသိုလ် နယ်မြေကို ပုဒ်မ (၁၄၄) အမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၅) says:
July 4, 2011 at 2:03 AM Reply
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၅)
ဂျူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့ မနက် (၁၁) နာရီမှာတော့ ကျောင်းသားထု အစည်းအဝေး ကျင်းပပြီး ပုဒ်မ (၁၄၄) ကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ခြင်း၊ မတရား ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက် (၂၂) ချက်ကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုခြင်း၊ တက္ကသိုလ် ပရ၀ှဏ်အတွင်း စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာ လှည်းတန်း ဂါတ်တဲက ရဲကားတန်း တစ်ခု ရုတ်ချည်း ၀င်ရောက်လာပြီး အင်အား (၂၀၀) ခန့် သုံးကာ ကိုဗဆွေလေးနဲ့ ကိုသက် အပါအ၀င် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေနဲ့ ရဲတွေဟာ အဓိပတိလမ်းပေါ်မှာ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံကြပြီး ရဲတွေက မျက်ရည်ယို ဗုံးတွေနဲ့ပစ်၊ နံပါတ် ဒုတ်တွေနဲ့ ရိုက်၊ ကျောင်းသားတွေက ရရာ ခဲတွေနဲ့ ပစ်ပေါက် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါတယ်။
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၆) says:
July 4, 2011 at 2:05 AM Reply
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၆)
သွေးသံရဲရဲနဲ့ ကျောင်းသားတွေကို တွေ့ရတဲ့အခါ ကျောင်းသာထုဟာ ပိုမို နာကျည်းလာပြီး တောင်ငူဆောင်၊ ဒဂုံဆောင်၊ မန္တလေးဆောင် စတဲ့ ကျောင်းသားတွေက အင်အားထု ကြီးမားစွာ ပြန်လည်တုန့်ပြန်ရာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာပြီး ရဲတွေက ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ အ၀ိုင်းလေး မှတ်တိုင်အနီးမှာ ဆွဲအားကောင်းတဲ့ အသံဖမ်းစက်နဲ့ လှုပ်ရှားမှု မှန်သမျှကို ဖမ်းယူပြီး မြန်မာ့အသံကွပ်ကဲမှုရုံးကို စဉ်ဆက်မပြတ် သတင်းပို့ နေပါတယ်။
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၇) says:
July 4, 2011 at 2:07 AM Reply
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၇)
ဗဟိုကွပ်ကဲမှု နေရာက မြန်မာ့အသံမှာ ဖြစ်ပြီးဗဟိုလုံခြုံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်စိုး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး လှဟန်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းစိန်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်လွင်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ဘဦး၊ ရဲချုပ် ဦးဘအေး၊ ပါမောက္ခချုပ် ဦးကာတို့ ရှိနေကြပါတယ်။ အနီးကပ်ကွပ်ကဲမှု အဖွဲ့ မှာ သနက (၄) တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စိန်လွင်၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာ တပ်မှူး ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး လှမြင့်၊ လက်ထောက် ရဲမင်းကြီး ဦးလှငွေတို့ ပါဝင်ပြီး အခြေအနေကို မပြတ် စောင့်ကြည့်နေ ကြပါတယ်။ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီးလည်း လှုပ်ရှားသွားလာ ညွှန်ကြားနေပါတယ်။
ညနေပိုင်းမှာတော့ စစ်ကားတွေ ရောက်ရှိလာကာ စစ်သားတွေဟာ ဂျာမနီ နိုင်ငံလုပ် BA (63) G3, BA (64) G4 မောင်းပြန် ရိုင်ဖယ်များ ကိုင်ဆောင်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်း စာတိုက်မှ စ၍ အဓိပတိ လမ်းတစ်လျှောက်နဲ့ မန္တလေး ဆောင်ဝင်းဘက်ကို မျက်နှာမူ အသီးသီး နေရာယူလိုက်ကြပါတယ်။ စာတိုက်ဝင်း ခြံစည်းရိုး အနီးမှာ ဒု ဗိုလ်မှူးကြီးစိန်လွင်အား ကျောင်းသား တချိူ့က တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျောင်းသားတွေက ဗိုလ်မှူးတို့ တပ်တွေ ကမာရွတ် ဂတ်တဲ အထိ ဆုတ်ခွာပေးပါလို့ လေပြေထိုး ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ အထက် အမိန့်အရ လာတာဖြစ်လို့ ဆုတ်မပေးနိုင်ဘူးဟု ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၈) says:
July 4, 2011 at 2:11 AM Reply
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၈)
ကျောင်းသားတွေကို လူစုခွဲဖို့နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ့်အဆောင်ကို ပြန်ဝင်ခိုင်းဖို့ဗိုလ်စိန်လွင်က ပြန်လည် ပြောဆိုပါတယ်။ ကျောင်းသားထဲက တချို့ဟာ သူတို့အတွက် မရပ်တည်တဲ့ ပါမောက္ခချုပ် ဦးကာရဲ့ ကားနံပါတ် (စ - ၆၅၉) နဲ့ ကျောင်းပိုင်ကား (စ - ၆၂၀၃) တို့ကို လမ်းမပေါ်မှာ မီးရှို့လိုက်ရာမှ တင်းမာမှု အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်က စာတိုက်အနီးကို ဖီးယက် ကားတစ်စီး ရောက်ရှိလာပြီး ဗိုလ်စိန်လွင်ကို စာတစ်စောင် ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီစာကတော့ ကျောင်းသားတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်ဖို့ “ပစ်မိန့်” ပေးလိုက်တဲ့ စာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်စိန်လွင်က တပ်မှူးတွေကို ခေါ်ယူပြီး ပစ်ရန် ညွှန်ကြားပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက် G3, G4 မောင်းပြန် ရိုင်ဖယ်တွေနဲ့တက္ကသိုလ် ၀င်းအတွင်းက ကျောင်းသားတွေကို သုံး မိနစ် ပစ်၊ နှစ် မိနစ် နား စနစ် နဲ့အတွဲလိုက် ပစ်ခတ်ပါ တော့တယ်။
ဒဏ်ရာရ သေဆုံးသူ (၁၀၀) ၀န်းကျင် ရှိခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ် နယ်မြေဟာ ဥဒါန်း မကြေစရာ “သွေးကြွေး” တင်ခဲ့လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာ “ရန်ကျန် တက္ကသိုလ်” ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၉) says:
July 4, 2011 at 2:12 AM Reply
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၉)
စစ်ဘီလူးတွေဟာ အားမရ သေးဘဲ ဂျူလိုင်လ (၈) ရက် မနက် (၄) နာရီ ၀န်းကျင်မှာ စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်က ဗိုလ်မှူး ထွန်းရီ ဦးစီးပြီး တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂ အဆောက်အအုံ ကြီးအား ဒိုင်းနမိုက် နဲ့ ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီး ပစ်လိုက်ပါတယ်။
(၇) နာရီ မှာတော့ ဗိုလ်နေ၀င်းက “ဓား ဓား ချင်း၊ လှံ လှံ ချင်း” စိန်ခေါ်တဲ့ မိန့် ခွန်းကို မြန်မာ့အသံမှ နားခါးစရာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၁၀) says:
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၁၀)
ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ဗိုလ်နေ၀င်းနဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြီး တို့ က “အိုကေ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့သူလုပ်တယ် ငါလုပ်တယ်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ အပြန်အလှန် စွပ်စွဲ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ ဗဟို ကွပ်ကဲမှု ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်စိုးအား သမဂ္ဂ အဆောက်အဦး ထဲမှာ ရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ထွက်လာကြဖို့ အသံချဲ့ စက်နဲ့ ပြောကြားရန်၊ မထွက်လာရင် ရီကွိုင်လက် လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ဖမ်းမယ်လို့ ထည့်သွင်း ပြောကြားရန်၊ ညနေပိုင်း မမှောင်ခင် လုပ်ရန်နဲ့ လိုအပ်ရင် လက်နက်ကြီး သုံးဖို့ အမိန့် ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရီကွိုင်လက် လက်နက်ကြီး ဟာ ပေါက်ကွဲမှု ပြင်းထန်တဲ့ စွမ်းအားရှိလို့အဲဒီလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ရင် အဆောက် အဦး မခံနိုင်ဘဲ ပွင့်ထွက်ကာ မိုင်းဖောက်ခွဲတာနဲ့စွမ်းအားအတူတူ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဦးအောင်ကြီးက ဆင်ဝှေ့ ရန်ရှောင် ရှင်းရာမှာ ဗိုလ်လှဟန်နဲ့ အတူ ဦးနေ၀င်း ထံကို သမဂ္ဂ အဆောက်အဦး ဗုံးခွဲမဲ့ကိစ္စ တားဆီးဖို့ သွားတာလို့ ပြောပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်အမှန်က ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့က ဗုံးခွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်တာကို ဦးနေ၀င်းထံ အတည်ပြုပေးဖို့ သွားရောက် တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီကိစ္စကို ဦးနေ၀င်းက အိုကေ ဆက်လုပ်ပါလို့ သဘောတူခဲ့လို့ ဦးအောင်ကြီးကလည်း ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့အား ညွှန်ကြားပြောဆို ခိုင်းစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်း တရားခံ ဗိုလ်နေ၀င်း နဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြီး တို့ နှစ်ဦးနဲ့ ကြံရာပါ စစ်ဘီလူးတွေ အားလုံးကြောင့် သမဂ္ဂ အဆောက်အဦးအတွင်းမှာ နားခိုနေကြတဲ့ ဒဏ်ရာရ ကျောင်းသူကျောင်းသား မြောက်များစွာဟာ အဆောက်အဦးကြီးနဲ့အတူ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လို့ ရင်နင့်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၁၁) says:
July 4, 2011 at 2:21 AM Reply
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၁၁)
၁၉၆၃ ဂျူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့မှာတော့ ဆဲဗင်းဂျူလိုင် တစ်နှစ်မြောက် အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြရာ ကျောင်းသားများအားလုံး မျက်ရည်ကျ ၀မ်းနည်း ဂုဏ်ယူကြပြီး ကျဆုံးသူများ အတွက် လွမ်းသူ့ ပန်းခွေ ချခဲ့ကြပါတယ်။ မူလနေရာမှာ ယာယီ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦးကို ဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က စပြီး ကျောင်းသားတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲ၊ နှလုံးသား ထဲမှာ စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးကို ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာစွာနဲ့ အမြစ်တွယ် ကိန်းဝပ် လာခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ နုပျိုသစ်လွင် ရယ်မောသံတွေနဲ့ စည်ကားခဲ့တဲ့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ပရ၀ုဏ်ဟာ ယနေ့ဆိုရင် ခြောက်သွေ့ တိတ်ဆိတ်နေပြီး တက္ကသိုလ်တွေကို အဝေးကို လွှင့်ထုတ်ထားရတဲ့အထိ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ သတ္တိကို ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်များ ချီပြီး ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီအရေးအခင်းကို မမှီလိုက်တဲ့ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသား လူငယ်တိုင်းဟာ လက်ဆင့်ကမ်း တကူးတက ပေးဝေငှလို့ မဟုတ်ဘဲ နှလုံးသားအသိလေ့လာမှု ကြောင့် ကိုယ်စီ၊ ကိုယ်စီ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက် အလိုလို ပေါက်ဖွားလာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကို သူတို့ ကျောင်းသား ဘ၀က ကြုံခဲ့ကြတဲ့ O.T.S ဗိုလ်သင်တန်း၊ အပတ်စဉ် (၂၉) ကျောင်းဆင်း အရာရှိတွေဟာ တပ်ရင်းမှူး ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ အချင်းချင်း အလွတ်သဘော ဝေဖန် ဆွေးနွေးကြရာမှာ သမဂ္ဂအဆောက်အဦးကို မိုင်းခွဲဖို့ မလိုကြောင်း၊ သမဂ္ဂ အဆောက်အအုံက ဂျက်ထိုး ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးမကြီးအား အင်အားသုံး ရိုက်ဖျက်ပြီး အတွင်းက ခိုလှုံနေကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဖမ်းဆီးယုံဖြင့် သွေးထွက်သံယို နည်းပါးသွားမယ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်အောင်ကြီးနဲ့ ဗိုလ်ကျော်စိုး တို့ မှာ လည်းတာဝန်ရှိပြီး အဲဒီတုန်းက ရီကွိုင်လက် နောက်ပွင့်လက်နက်ကြီး ဟာ ရှေ့တန်းမှာရောက်နေလို့ ရှာလို့ မရဖြစ်နေချိန်မှာ ကွပ်ကဲမှုပေးတဲ့ အရာရှိကြီးတွေ အနေနဲ့ အခြေအနေကို ထိမ်းသိမ်းဖို့၊ စီမံခန့်ခွဲဖို့၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖို့ ညံ့ဖျင်းကာ နှိပ်ကွပ်ဖို့ကိုဘဲ တာစူနေ ကြကြောင်း၊ ဗိုလ်စိန်လွင်ဟာ G3,G4 တွေကို တစ်တောင့်ချင်း အပေါ်ထောင်ပစ်ရုံနဲ့ ဖြေရှင်းရနိုင်ကြောင်း စသဖြင့် ကျဆုံးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းများကို တမ်းတ လွမ်းဆွတ်ရင်း သုံးသပ်ပြောဆို ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၁၂) says:
July 4, 2011 at 2:23 AM Reply
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် (၁၂)
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ မဟာ ကျောင်းသားတွေဟာ နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့အစည်း လောင်းရိပ်တွေ အောက်က ကင်းလွတ်ပြီး သီးခြား လွတ်လပ်တဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး အင်အားစုကြီး တစ်ရပ်အဖြစ် ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ အပြင် ကျောင်းသားတွေရဲ့ စွန့်လွတ်စွန့်စားတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အနစ်နာခံတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေဟာ အံ့မခန်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ပြည်သူလူထုနဲ့ ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီး ကြီးမားတဲ့ အမျိုးသား နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဆက်လက် ရပ်တည်ခဲ့ကြတာကို ဂုဏ်ပြုရင်း ရေးသားတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား။
(ရင်းမြစ် - ကိုဖိုးတရုတ်ဘလော့)
ရန်ကျန် တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် says:
July 4, 2011 at 3:22 AM Reply
ရန်ကျန် တက္ကသိုလ် (သို့မဟုတ်) ဆဲဗင်း ဂျူလိုင်
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၁) says:
July 4, 2011 at 3:25 AM Reply
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၁)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖြစ်လာမယ့် ကိုအောင်ဆန်းဟာ အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ပြည်ပကို စွန့်စွန့်စားစားနဲ့ တရားမဝင် ထွက်ခွာပြီး ဂျပန်ပြည်မှာ လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကို မျိုးစေ့ချခဲ့ပါတယ်။ ပထမလွတ်လပ်ရေးရဖို့ လမ်းဖောက်နိုင် ခဲ့တယ်။ အသက် ၃၁ နှစ်မှာ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီး ပထမလွတ်လပ်ရေးကို မမြင်ရခင် အသက် ၃၂ နှစ်မှာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းကတော့… အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ကြိုးစင်ပေါ် ရင်ကော့တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယလွတ်လပ်ရေး အတွက် လမ်းဖောက်နေရင်း ဒုတိယလွတ်လပ်ရေးကိုမမြင်ရခင် လမ်းခုလတ်မှာ အသက်စွန့်သွားခဲ့တာပါ …
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၂) says:
July 4, 2011 at 3:27 AM Reply
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၂)
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၃) says:
July 4, 2011 at 3:28 AM Reply
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၃)
သူဟာ ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့… ကျောင်းသားအခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးအတွက်… ကျောင်းသား သပိတ်တွေမှာ ပါခဲ့တယ်။ တတပ်တအားနဲ့ ဦးစီးဦးဆောင် ဝင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ကျောင်းသားသပိတ် ၃ ခုကို ဖောက်ခွဲရှေ့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၄ ဒီဇင်ဘာ ဦးသန့်ဈာပန ကျောင်းသားသပိတ်၊ ၁၉၇၅ ဇွန် အလုပ်သမားသတ်ပွဲ နှစ်ပတ်လည် ရွှေတိဂုံကျောင်းသားသပိတ်၊ ၁၉၇၆ မတ် သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရာပြည့် ကျောင်းသားသပိတ်တွေဟာ ကိုတင်မောင်ဦးကို သိက္ခာသုံးထပ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဆန်းတာက ကျောင်းသားကို သေဒဏ်ပေးတာပါ။ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတယောက်ကို သေဒဏ် ပေးတာက ဆန်းနေပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၄) says:
July 4, 2011 at 3:29 AM Reply
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၄)
ကိုတင်မောင်ဦးကို ပြည်ပြေးသောင်းကျန်းသူ အဖျက်သမားလို့ စွပ်စွဲပြီး သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ‘နိုင်ငံတော်’ ကို သစ္စာဖောက်တယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး စစ်ခုံရုံးက နေ့ချင်းပြီးအမှုစစ် သေဒဏ်စီရင်ချက် ချလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် သူဟာ ထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တဲ့ ပီဒီပီ သို့မဟုတ် ပြည်ချစ်တပ်မတော် အဖွဲ့ဆီသွားရောက်ဆက် သွယ်ပြီး စစ်သင်တန်းတက်ခဲ့တယ်။ လက်နက်အကူအညီယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ ‘ပီဒီပီ’ အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ‘ပြည် ချစ်တပ်မတော်’သားအဖြစ် မရပ်တည်ခဲ့ပါဘူး။ လက်နက်ကိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဘဲ ရပ်တည်ခဲ့ပါ တယ်။ ကျောင်းသားတိုက်ပွဲ-လူထုတိုက်ပွဲကို လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ- လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖို့ ကြိုး ပမ်းခဲ့ခြင်း သာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ABSDF နဲ့တကွ စစ်မှန်တဲ့ တော်လှန်ရေး အင်အားစုအားလုံးလိုလို လက်ခံထားတဲ့ လူထုတိုက်ပွဲနဲ့ လက်နက် ကိုင်တိုက်ပွဲ ပေါင်းစပ်ရေးမူကို ကိုတင်မောင်ဦးက ကျောင်းသားတယောက်အဖြစ် ပထမဆုံး လက်တွေ့အကောင် အ ထည်ဖော်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ (လူထုတိုက်ပွဲနဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ ပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့ ကိုတင်မောင်ဦး သွားရောက် ဆက်စပ်ခဲ့တဲ့ ပီဒီပီအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ထာဝရခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးနုကတော့ ကိုတင်မောင်ဦး ကြိုးပေးခံရပြီး ၄ နှစ်အကြာမှာ ကိုတင်မောင်ဦးကို ကြိုးပေးခဲ့သူတွေထံ ဒူးထောက်အညံ့ခံသွားခဲ့တာကတော့ ကံကြမ္မာရဲ့ သရော်ချက်ပါဘဲ။)
ကျောင်းသား ဆိုတာ ဘယ်သူ့နောက်လိုက်မှမဟုတ် ဘယ်သူ့သြဇာမှမခံပါ…
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၅) says:
July 4, 2011 at 3:30 AM Reply
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၅)
ဒါ့အပြင် သူဟာ လူမျိုးကိုအခြေမခံတဲ့ ကျောင်းသားတယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့် ချင်းတိုင်းရင်းသား တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့၊ သူ့ခေါင်းထဲမှာရှိတာက စစ်အာဏာရှင်ကိုခြွင်းချက်မရှိဖြုတ်ချရေးဖြစ်ပါတယ် တနိုင်ငံလုံးအရေး ဖြစ်ပါတယ်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားအရေး မဟုတ်… ချင်းပြည်နယ်အရေးမဟုတ်… တနိုင်ငံလုံးမှာ စစ်အာဏာရှင် စနစ် နိဂုံးချုပ်ဖို့ အရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ နိုင်ငံ့ဗဟိုချက် ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ လူထုတိုက်ပွဲတွေကို ဖောက်ခွဲ ခေါင်း ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးကို ဦးဆောင်မှုပေးဖို့ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံကြိုးပမ်းခဲ့တာ တိုင်းရင်းသားထဲမှာ ကိုတင်မောင် ဦး အပြင် နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်ယောက်များရှိပါသလဲ၊ ဒီကနေ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရော ဗမာနိုင်ငံရေး သ မားတွေပါ ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့ကောင်းပါတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၆) says:
July 4, 2011 at 3:32 AM Reply
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၆)
ကိုတင်မောင်ဦးကို ကြိုးပေးချိန်မှာ ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေဟာ အင်းစိန်ထောင်ထဲ အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲတွေ ဝင် ထားပြီးချိန် ဖြစ်ပါတယ်… အင်းစိန်ထောင် ၃ ဆောင်မှာလဲ ထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် သွေးချောင်း စီးရိုက်ပွဲ ဆင်ထားပြီးချိန် ဖြစ်ပါတယ်။… သရက်ထောင်မှာလဲ အကျဉ်းစံကျောင်းသားတွေက ထောင်ကို စီးနင်းသိမ်း ပိုက် ဆန္ဒပြခဲ့ချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့် ကိုတင်မောင်ဦးအတွေးအခေါ်အတိုင်း စစ်အာဏာရှင်တွေကို ဘယ်နေရာမှဒူးမထောက်ဘဲ အကြမ်း မဖက်လူထုတိုက်ပွဲနည်းဖြစ်တဲ့ အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲရော၊ အကြမ်းပတမ်းတိုက်ပွဲနည်းဖြစ်တဲ့ ရင်ဆိုင်ရိုက်ပွဲ ထောင်ထပွဲ တွေကိုပါ ဆင်နွှဲထားကြချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ တိုက်ဆိုင်မှု မဟုတ်… ကျောင်းသားတွေရဲ့ အသွေးအသားထဲ နက်နက် ရှိုင်းရှိုင်းစိမ့်ဝင်နေတဲ့ မတရားမှုတွန်းလှန်ရေး ဗီဇအတွေးအခေါ်၊ စစ်အာဏာရှင်ကိုဒူးမထောက်ရေးဝိညာဉ် ပုံမှန်တန်ခိုး ပြ ထကြွမှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၇) says:
July 4, 2011 at 3:33 AM Reply
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၇)
ဒါတွေကြောင့်… ကျောင်းသားတွေဟာ ၁၉၆၂ ခု ဇူလိုင် ၇ ရက်မှာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ သတ်ဖြတ်မှုကို ပထမဆုံး ခံခဲ့ကြရပါတယ်။… ၁၉၅၈ အာဏာသိမ်းပွဲ၊ ၁၉၆၂ နဲ့ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းပွဲတွေကို ပထမဆုံးဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသူတွေ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တောက်လျှောက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အပေးအယူမလုပ်စတမ်း မစေ့စပ် စတမ်း သို့မဟုတ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမလုပ်စတမ်း တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတွေဖြစ်သလို လူထုတိုက်ပွဲနဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲပေါင်းစပ်ရေးကို အရင်ဆုံးသဘောပေါက်ခဲ့သူတွေလဲဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၈) says:
July 4, 2011 at 3:34 AM Reply
အသက် ၂၅ နှစ်မှာ ဂုဏ်ရောင်သုံးထပ်နဲ့ လူ (၈)
(၁၉၆၂ ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် ကျဆုံးသွားသော ကျောင်းသားများကို ဂုဏ်ပြုရေးဖွဲ့ပါသည်။)
July 4, 2011 at 10:11 AM Reply
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မွေးနေ.စုတောင်းကို ငြိမ်းချမ်းရေး ပေးဖို. တောင်းခဲ.ပါတယ်၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ.ရးကိုလည်း ကြိုးစားနေပါတယ် ဒီပိုစ်.တွေ ဒီကွန်းမန်.တွေက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပျက်ဖို.နဲ. အမျိုးသားရင်ကြားစေ.ရေးကို ဝေးကွာစေဖို. ဖြစ်နေပါတယ်။ ချစ်စကိုရှည်စေ မုန်းစကို တိုစေဆိုတာ ကြားဖူးကြမှာပါ။ မေတ္တာတရားရှေ.ထားပြီး ငြိမ်းချမ်းဖို.ပဲ ဦးတည်ကြပါ။
လူအချင်းချင်း ရန်လိုခြင်း ကင်ရှင်းကြပါစေ ပိုစ်.မရှိတိုင်း အဟောင်းပြန်တင်တာတွေ၊ ကွန်းမန်.ပေးစရာမရှိတိုင်း တွေ.သမျှ ကော်ပီကူးတင်တာတွေ ကင်းရှင်းကြပါစေ
July 4, 2011 at 10:32 AM Reply
တချို့ မှတ်ချက်တွေက spam ထဲ သွားဝင်နေလို့ Not spam ပြန်လုပ်ထားပေးပါတယ်။ တခါတလေ မှတ်ချက်ထည့်ပြီး နောက်တခါပြန်လာကြည့်လို့ မရှိဘဲဖြစ်နေရင် Spam ထဲမှာ ၀င်နေတာ ဖြစ်နိုင်လို့ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ထည့်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်ထဲ ရောက်ရင် လာဆဲထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေ အနှောင့်အယှက် ပြဿနာလာရှာတဲ့ မှတ်ချက်တွေကလွဲရင် Spam ထဲဝင်နေတာတွေ အားလုံးကို Not spam ပြန်လုပ်ပေးပါတယ်။
၂၀၁၀ ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ ပြည်ထောင်စုနေ့အကြောင်း တင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး သမိုင်းအမှန်တွေကို တင်တိုင်း ကျွန်မ အမြဲအဆဲခံရပါတယ်။ အခုတော့ လုံးဝဂရုမစိုက်တော့လို့ ဘလော့ဂ်မှာ အခုတင်ထားတဲ့ မေတ္တာပို့သီချင်းညည်းတာတောင်မပျက်ဘူး။
Link မပါဘဲနဲ့ ကိုယ်တိုင် တရားပေါက်ပြီး ရလာတဲ့ တရားတွေလိုလို တရားစာတွေလာရေးတာ၊ သူများပို့စ်ကို ကိုယ့်ပို့စ်လိုလို သူများမှတ်ချက်ကို ကိုယ့်မှတ်ချက်လိုလိုနဲ့ ဘာမှ အညွန်းမပေးဘဲ ကူးလာပြီး လာထည့်သူတွေ ရှိဖူးလို့ ကျွန်မမှာ အညွန်းပြန်ထည့်ပေးဖို့ ပြောခဲ့ရ၊ လာမထည့်ပေးရင် ဖျက်ခဲ့ရတာတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုလို သမိုင်းဝင် အဖြစ်အပျက်တွေကို ဘယ်ဆိုက်က ကူးလာတယ်ဆိုတဲ့ Link တွေ အတိအကျနဲ့ လာထည့်ပေးတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ ဖတ်ချင်ရင် ဖတ်လို့ရအောင် လာပေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွထဲမှာလည်း 7, July 1962 တုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်လို့ ပို့စ်ထဲမှာ ၀ါကျတကြောင်းထပ်ထည့်ပြီး ကျွန်မ ညွန်းပေးလိုက်မယ်။ Links တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
July 4, 2011 at 1:27 PM Reply
နင် လျှာရိုးမရှိတိုင်း ပြောမနေနဲ့ဟဲ့.. နင်တို့စစ်တပ်က လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို နှစ် ၅ဝ လုံးလုံး စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ သတ်ချင်တိုင်းသတ်လာပြီး ဘွာတေး ပြောရုံနဲ့ ပြီးရော့လားဟဲ့..
July 4, 2011 at 1:39 PM Reply
7 July, 1962 မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ post ကိုရော၊ comments တွေက ဆောင်းပါးတွေကိုပါ သေသေချာချာ ဖတ်ပြီး ကြေကွဲရပါတယ်.. သမိုင်းအမှန်တွေကို တင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁) says:
July 5, 2011 at 6:11 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂) says:
July 5, 2011 at 6:14 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၃) says:
July 5, 2011 at 6:17 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၃)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၄) says:
July 5, 2011 at 6:19 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၄)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၅) says:
July 5, 2011 at 6:21 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၅)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၆) says:
July 5, 2011 at 6:24 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၆)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၇) says:
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၇)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၈) says:
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၈)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၉) says:
July 5, 2011 at 6:30 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၉)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁ဝ) says:
July 5, 2011 at 6:33 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁ဝ)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၁) says:
July 5, 2011 at 6:35 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၁)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၂) says:
July 5, 2011 at 6:37 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၂)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၃) says:
July 5, 2011 at 6:39 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၃)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၄) says:
July 5, 2011 at 6:41 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၄)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၅) says:
July 5, 2011 at 6:43 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၅)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၆) says:
July 5, 2011 at 6:45 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၆)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၇) says:
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၇)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၈) says:
July 5, 2011 at 6:50 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၈)
ဦးကာ ဆိုတာ အရင်က သင်္ချာကထိကပါ၊ ပါမောက္ခတောင် မဖြစ်ဖူးပါဘူး။ တင်းကြပ်တဲ့ မတရား အဆောင်စည်းကမ်း တွေဟာ သူ့လက်ချက်လို့ ကျောင်းသားတွေက ထင်နေကြတယ်။
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၉) says:
July 5, 2011 at 6:53 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၁၉)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂ဝ) says:
July 5, 2011 at 6:56 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂ဝ)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၁) says:
July 5, 2011 at 7:12 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၁)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၂) says:
July 5, 2011 at 7:14 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၂)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၃) says:
July 5, 2011 at 7:16 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၃)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၄) says:
July 5, 2011 at 7:18 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၄)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၅) says:
July 5, 2011 at 7:19 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၅)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၆) says:
July 5, 2011 at 7:21 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၆)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၇) says:
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၇)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၈) says:
July 5, 2011 at 7:26 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၈)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၉) says:
July 5, 2011 at 7:29 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၂၉)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၃ဝ) says:
July 5, 2011 at 7:31 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၃ဝ)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၃၁) says:
July 5, 2011 at 7:33 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၃၁)
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၃၂) says:
July 5, 2011 at 7:35 AM Reply
ကျောင်းသား ၁၃ဝ ကျော် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် (၃၂)
7th July ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ says:
July 5, 2011 at 7:58 AM Reply
7th July ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ
ကို ဖတ်ရန် "7th July ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။
July 5, 2011 at 9:04 AM Reply
7 July နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက် လာဖြည့်ပေးသူတွေ စာလာဖတ်သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်ချက် အတော်များများက spam ထဲ သွားဝင်နေလို့ Not spam ပြန်လုပ်ထားရတယ်။ အာဏာရှင်တွေ ဖုံးထားတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေကို ဖေါ်ပြနေလို့ အမှန်တရားကို လက်မခံနိုင်ဘဲ သမိုင်းမှန် လူသိမှာကို ကြောက်လို့တုန်နေသူတွေ အနာပေါ်ဒုတ်ကျလို့ ခံရခက်ပြီး ပြဿနာလာရှာနေသူ အာဏာရှင်နောက်မြှီးဆွဲတွေ ကိုတော့ ၀ဋ်ကြွေးလို့ပဲ သဘောထားကြပါ။ လာဆဲ၊ လာကလိ၊ အမျိုးမျိုး အနှေင့်အယှက်ပေးလည်း ရပ်သွားမယ် မထင်နဲ့။ နောက်ထပ် အာဇာနည်နေ့၊ ရှစ်လေးလုံးနေ့ စက်တင်ဘာ သွေးစွန်းနေ့တွေမှာ အာဏာရှင်တွေရဲ့ လူမဆန်ယုတ်မာ ရက်စက် ကောက်ကျစ်မှုတွေအကြောင်း ဆက်တိုက်လာဦးမှာ ဖြစ်တယ်။
သမိုင်းမှန်ကို အမှန်အတိုင်း တင်ပြပေးနေတဲ့ မငယ်နိုင်ရဲ့ 7th July ပို့စ်တွေအတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
စစ်ခွေးတွေရဲ့ဗီဇ ဖျောက်ရခက်ပါတယ် says:
July 7, 2011 at 5:38 AM Reply
စစ်တွေမြို့တွင် စစ်သားများက သားအဖ နှစ်ယောက်ကို မင်းမဲ့စရိုက်ဖြင့် လူမဆန်စွာ ပစ်သတ်မှု says:
July 7, 2011 at 5:41 AM Reply
စစ်တွေမြို့တွင် စစ်သားများက သားအဖ နှစ်ယောက်ကို မင်းမဲ့စရိုက်ဖြင့် လူမဆန်စွာ ပစ်သတ်မှု
ဦးသာထွန်းအောင်က “ဒီကလေးတွေက ရပ်ကွက်ကပါ၊ အလှူလုပ်ဖို့ အုန်းတပင် ရပ်ကွက်ကောင်စီရုံးက ခုံတွေကို ဥက္ကဌ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ငှားတာပါ” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ စစ်သားက “ဒီအဖိုးကြီး နာချင်နေပြီနဲ့ တူတယ်” လို့ ပြောပြီး ဦးသာထွန်းအောင်ရဲ့ ရင်ဘတ်ကို သေနတ်ဒင်နဲ့ ထုရိုက်လိုက်တယ်။
အဖေကို သားရှေ့မှာ မတရား ရိုက်နေတော့ သားဖြစ်သူ ဘတင်အောင် ရဲ့ မတရားတာကို ခေါင်းငုံ မခံချင်တဲ့စိတ်၊ အမှန်တရားဘက် ရပ်တည်လိုတဲ့ လူငယ်စိတ်ကြောင့် စစ်သားရဲ့ မျက်နှာကို လက်သီးနဲ့ တစ်ချက် ထိုးလိုက်တာပေါ့။ အနားမှာ ရပ်နေတဲ့ အရာရှိက “ဒီကောင်တွေကို တစ်ယောက်မကျန် သတ်ပစ်လိုက်စမ်း” လို့ အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။
အမိန့်ရလိုက်တဲ့ စစ်ဘီလူးဟာ G3 သေနတ်နဲ့ ဦးသာထွန်းအောင် ရဲ့ ရင်ဘတ် ကို ၃ ချက် ပစ်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သား ဘတင်အောင် ရဲ့ ဦးခေါင်းကို အသေချာ ချိန် ပြီး ပစ်လိုက်တယ်။ ဘတင်အောင် ဦးခေါင်း ပွင့်ကျသွားတယ်။ ဒါကို မကျေနပ်နိုင်သေးပဲ ရင်ဘတ်ကို နောက်ထပ် ၂ ချက် ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။ သွေးတွေကတော့ ကြောက်မက်ဖွယ် လမ်းမပေါ်မှာ စမ်းချောင်းသဖွယ် စီးဆင်းကုန်တာပေါ့။
အဲဒီနောက် မိုးပေါ်ကို သေနတ် (၇) ချက် ပစ်တယ်။ ပြီးတော့ သေနတ်သံကြားလို ကြောက်ပြီး ထွက်ပြေးနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို လှမ်းပစ်တော့တာပေါ့။ သေနတ်သံနဲ့အတူ အော်ဟစ်သံတွေ ငိုကြွေးသံတွေ ထွက်ပေါ်လာတယ်။
(အပြည့်အစုံကို ဖတ်ရန် "စစ်တွေမြို့တွင် စစ်သားများက သားအဖ နှစ်ယောက်ကို မင်းမဲ့စရိုက်ဖြင့် လူမဆန်စွာ ပစ်သတ်မှု" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။)
July 7, 2011 at 5:46 AM Reply
အဖေကို သားရှေ့မှာ မတရား ရိုက်နေတော့ သားဖြစ်သူ ဘတင်အောင် ရဲ့ မတရားတာကို ခေါင်းငုံ မခံချင်တဲ့စိတ်၊ အမှန်တရားဘက် ရပ်တည်လိုတဲ့ လူငယ်စိတ်ကြောင့် စစ်သားရဲ့ မျက်နှာကို လက်သီးနဲ့ တစ်ချက် ထိုးလိုက်တာပေါ့။ အနားမှာ ရပ်နေတဲ့ စစ်ဗိုလ်က “ဒီကောင်တွေကို တစ်ယောက်မကျန် သတ်ပစ်လိုက်စမ်း” လို့ အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။
အမိန့်ရလိုက်တဲ့ စစ်ဘီလူးဟာ G3 သေနတ်နဲ့ ဦးသာထွန်းအောင် ရဲ့ ရင်ဘတ် ကို ၃ ချက် ပစ်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သား ဘတင်အောင် ရဲ့ ဦးခေါင်းကို အသေအချာ ချိန် ပြီး ပစ်လိုက်တယ်။ ဘတင်အောင် ဦးခေါင်း ပွင့်ကျသွားတယ်။ ဒါကို မကျေနပ်နိုင်သေးပဲ ရင်ဘတ်ကို နောက်ထပ် ၂ ချက် ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။ သွေးတွေကတော့ ကြောက်မက်ဖွယ် လမ်းမပေါ်မှာ စမ်းချောင်းသဖွယ် စီးဆင်းကုန်တာပေါ့။
အဲဒီနောက် မိုးပေါ်ကို သေနတ် (၇) ချက် ပစ်တယ်။ ပြီးတော့ သေနတ်သံကြားလို့ ကြောက်ပြီး ထွက်ပြေးနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို လှမ်းပစ်တော့တာပေါ့။ သေနတ်သံနဲ့အတူ အော်ဟစ်သံတွေ ငိုကြွေးသံတွေ ထွက်ပေါ်လာတယ်။
တပ်မတော်ဟာ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ says:
July 7, 2011 at 5:49 AM Reply
တပ်မတော်ဟာ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ
စစ်တွေမြို့မှာ စစ်သားတွေက လက်နက်မဲ့ သားအဖ နှစ်ယောက်ကို မင်းမဲ့စရိုက်ဖြင့် လူမဆန်စွာ ပစ်သတ်မှုကို သိရတော့ တပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူး၊ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ မြင်တယ်။
သေနတ်ပြောင်းဝဟာ ပြည်သူလူထုဘက်ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးခင်းတုန်းကလဲ တစ်ကြိမ် လှည့်ခဲ့ပြီးပြီ။ အခု ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာလည်း နောက်တစ်ကြိမ် လှည့်လာခဲ့ပြီ။ နောက်လည်း အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေဘက်ကို လှည့်လာအုံးမှာပဲ လို့ မြင်ယောင်မိတယ်။
(အပြည့်အစုံကို ဖတ်ရန် "တပ်မတော်ဟာ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။)
ပြည်သူကို သတ်စို့ says:
July 7, 2011 at 7:08 AM Reply
ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း လူသတ်ဝါဒ ငါတို့လိုက်နာမယ်။
"စစ်တပ်ဟာ ပစ်ရင် မှန်အောင် ပစ်ပါတယ်။"
လမ်းပေါ် ဆန္ဒပြတိုင်း အသေပဲ ပစ်သတ်မယ်။
မပြောင်းချင်တဲ့ လူတွေသတ်ဖို့ ပစ်မိန့် ပေးထားတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပါမရှောင် ငါတို့ ပစ်သတ်မယ်။
မြို့လယ်မှာလဲ မစဲဘဲ ပစ်ခတ်တယ်။
ဘယ်မှာ တွန့်ဆုတ်ပါလိမ့် ငါတို့ စစ်သားရယ်။
("တူယှဉ်ကာလေ တစ်ကယ်ပဲ အစွမ်းပြချင်တယ်" အစချီ "တူယှဉ်ကာတိုက်စို့" စစ်ချီသီချင်း၏ သံစဉ်အတိုင်း သီဆိုရန် )
July 7, 2011 at 7:09 AM Reply
တခေတ်တခါက ပျိုတိုင်းကြိုက်သည့် နှင်းဆီခိုင် ဖြစ်ခဲ့သော မြန်မာ့တပ်မတော်သည် စစ်အာဏာရှင်၏ ကိုယ်ပိုင်တပ်သဖွယ် အလွဲသုံးခြင်းကို ခံလာရသဖြင့် တစတစ စည်းကမ်းပျက်ကာ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်လာခဲ့ရာ တပ်မတော် အဆင့်မှ စစ်တပ် အဆင့်သို့ နိမ့်လျှောလာရာမှ ယနေ့တွင် နိုင်ငံတော် လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူ လူသတ် ဓါးပြ မုဒိမ်းတပ် အဖြစ်သို့ လုံးလုံး ကူးပြောင်းလာသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့နေရသဖြင့် သံယောဇဉ် မကင်းသော တပ်မတော်အတွက် ရင်ထုမနာ ဖြစ်ကာ ရေးစပ်ပါသည်။
တပ်မတော်သားများ အမြင်မှန် ရကာ ပြည်သူဘက်မှ ရပ်တည်ကာ ပြည်သူ့တပ်မတော်သား စစ်စစ်များ ဖြစ်လာနိုင်ကြပါစေ။
တူယှဉ်ကာ တိုက်စို့ (မူရင်း စစ်ချီသီချင်း ) says:
July 7, 2011 at 7:32 AM Reply
(မူရင်း စစ်ချီသီချင်း )
ဘယ်မှာ ကြောက်စိတ်ရှိလိမ့် ငါတို့စစ်သားရယ်။
July 7, 2011 at 7:33 AM Reply
"တူယှဉ်ကာတိုက်စို့" စစ်ချီသီချင်းကို လွန်ခဲ့သော နှစ် ၅ဝ က အနေအထား ဖြစ်သော ပျိုတိုင်းကြိုက်သည့် နှင်းဆီခိုင် ပြည်သူ့တပ်မတော်သား စစ်စစ်များ ဘဝဖြင့် ပြန်လည် သီဆိုနိုင်ကြပါစေ။
July 7, 2011 at 8:04 AM Reply
"စစ်တပ်ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင်ပစ်တယ်" (ဗွီဒီယို) says:
July 7, 2011 at 8:11 AM Reply
July 7, 2011 at 8:22 AM Reply
July 7, 2011 at 8:38 AM Reply
July 7, 2011 at 9:20 AM Reply
July 7, 2011 at 9:24 AM Reply
စစ်အာဏာရှင်၏ ကိုယ်ပိုင်တပ်သဖွယ် အလွဲသုံးခြင်းကို ခံနေရသော တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် "တူယှဉ်ကာတိုက်စို့" စစ်ချီသီချင်းကို လွန်ခဲ့သော နှစ် ၅ဝ က အနေအထား ဖြစ်သော ပျိုတိုင်းကြိုက်သည့် နှင်းဆီခိုင် ပြည်သူ့တပ်မတော်သား စစ်စစ်များ ဘဝဖြင့် ပြန်လည် သီဆိုနိုင်ကြပါစေ။
ပြည်သူကို သတ်စို့ (တပ်မတော်၏ အခြေအနေမှန်ပြ စစ်ချီသီချင်း) says:
July 7, 2011 at 9:31 AM Reply
(လက်ရှိ တပ်မတော်၏ အခြေအနေမှန်နှင့် ကိုက်ညီသည့် စစ်ချီသီချင်း)
("တူယှဉ်ကာလေ တကယ်ပဲ အစွမ်းပြချင်တယ်" အစချီ "တူယှဉ်ကာတိုက်စို့" စစ်ချီသီချင်း၏ သံစဉ်အတိုင်း သီဆိုရန် )
July 7, 2011 at 9:34 AM Reply
တခေတ်တခါက ပျိုတိုင်းကြိုက်သည့် နှင်းဆီခိုင် ဖြစ်ခဲ့သော မြန်မာ့တပ်မတော်သည် စစ်အာဏာရှင်၏ ကိုယ်ပိုင်တပ်သဖွယ် အလွဲသုံးခြင်းကို ခံလာရသဖြင့် တစတစ စည်းကမ်းပျက်ကာ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်လာပြီး တပ်မတော် အဆင့်မှ စစ်တပ် အဆင့်သို့ နိမ့်လျှောလာရာမှ ယနေ့တွင် နိုင်ငံတော် လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူ လူသတ် ဓါးပြ မုဒိမ်းတပ် အဖြစ်သို့ လုံးလုံး ကူးပြောင်းလာသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့နေရသဖြင့် သံယောဇဉ် မကင်းသော တပ်မတော်အတွက် ရင်ထုမနာ ဖြစ်ကာ ရေးစပ်ပါသည်။
July 7, 2011 at 11:49 AM Reply
စစ်ချီသီချင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းက အဖေ ဆိုနေကျ သီချင်း။ ကျွန်မလည်း မကြာခဏ ညည်းဆိုဖြစ်တဲ့သီချင်းပါ။ အစီစဉ်လိုက်မရပေမဲ့ ဒီသီချင်းကို ကျွန်မ တပုဒ်လုံးနီးပါးရပါတယ်။ ကျွန်မအဖေ အမြဲဆိုတဲ့သီချင်းမို့ ကျွန်မနားထဲမှာ အဖေ့အသံပဲ ကြားယောင်နေပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ရေးခါစက အဲဒီသီချင်းကို tag ပို့စ်တခု http://nge-naing.blogspot.com/2009/10/blog-post_16.html မှာတောင်ကျွန်မ ညွန်းဖူးပါတယ်။ ကျွန်မအဖေက ဒီမိုကရေစီခေတ်တုန်းက စစ်သားပါ၊ တပ်မတော်ကို သွေးစွန်းစေတဲ့ မဆလန၀ခေတ်စစ်သား မဟုတ်ပါဘူး။
July 7, 2011 at 7:28 PM Reply
ဘာကြောင်.လဲတော.မသိဘူး ကြောင်ချေးကတော. ခုလိုမိုးအေးအေး ဇူလိုင်လများ ရောက်ပီဆိုမှဖြင်.
လွမ်းသလိုလို ဘာလိုလို နဲ. မျက်ရည်လေး ဘာလေးတွေ တတွေတွေကျပီး ရီချင်သလိုလို ငိုချင်သလိုလို
တိုက်ချင်သလိုလို ရိုက်ချင်သလိုလို သြ၀ါဒပေးချင်သလိုလို မိန်.ခွန်းလေးဘာလေး ပြောချင်သလိုလို
ဟောပြောပွဲလေးဘာလေး စီစဉ်ချင်သလိုလို ဆွမ်းလေးဘာလေးကျွေး လူလေးဘာလေးစုပီး
ဟိုလိုလို ဒီလိုလို လုပ်ချင်သလိုလို ဘာလိုလို ပင်နီလေးဘာလေး ၀တ်ပီး လပ်လျားလပ်လျား
လမ်းသလားချင်လာသလိုလို ခမောက်လေးဘာလေးဆောင်းပီး သခင်သန်းထွန်းမျက်နှာပေါက်နဲ.
တောပြောတောင်ပြော ပြောချင်လာသလိုလို ကားမှတ်တိုင်မှာလူနဲနဲများလာရင်တောင်
အပြေးသွားပီး သခင်စိုးမျက်နှာပေါက်နဲ. ဟစ်တလာလိုမျိုးအလေးပြုခံချင်သလိုလို ဘာလိုလို
နဲ. ဘာမှထူးမလာတဲ. ဘာလိုလိုပေါင်းများစွာ ရောဂါ ရခဲ.တာဆိုရင်လဲ န၀တ တက်ခါစကအိမ်ထောင်ကျ
ခဲ.တဲ.ကြောင်ချေး အခုဆိုမြေးတောင်ရှင်ပြုလို.ရတဲ. အရွယ်ရောက်လာခဲ.ပါပီ။ နှစ်တွေ ဘယ်လောက်
ပဲကြာကြာ ဒီလ ရောက်ရင် ရောဂါက ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ပြန်ပြန်ပေါ်လာတာလဲ နှစ်တိုင်းပါပဲ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလာတော.လဲ ရောဂါက တော်တော်လေးကို ကျွမ်းနေပါပီ။ အသက်လေးဘာလေး
လဲရ လာတော. ဒီလိုမျိုး ရောဂါသဲတဲ. အချိန်ရောက်ရင် ကိုယ်တိုင်ဘာလိုလို မလုပ်နှိုင်ပေမဲ.
၇သေ.စိတ်ဖြေ ကိုယ်.နားအနီးတ၀ိုက် က ကလေးတွေ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေဆိုပါတော. သူတို.လေးတွေ
ကိုပဲ နည်းပေးလမ်းပြ လုပ်ပီး ရောဂါသက်သာရာသက်သာကြောင်း လေးလုပ်ယူရတယ်။ စိတ်တိုင်းတော.
တယ်မကျလှဘူးပေါ. ။စိတ်တိုင်းမကျ ပေမဲ.လဲ ဘေးကင်း၇န်ကင်း ရောဂါလေးဘာလေးသက်သာတော.လဲ
ဆက်လုပ်နေရတာပေါ.။ လက်ဆင်.ကမ်းပေးတဲ. သဘောလဲပါပါတယ်။ ယူသော်ရဧ။်ပေါ.ခင်ဗျာ။
ပညာအမွေတို. ဥစ္စာအမွေ တို. နောက်မျိုးဆက်ကို မပေးနှိုင်သော်ငြားလည်း ဘာလိုလို ရောဂါ အမွေလေး
ကိုတော.ဖြင်. မျိုးဆက်သစ် များအတွက် ကြောင်ချေးက မသေခင်ကတဲက ပေးခဲ.ပါတယ်ခင်ဗျ။
(ကြောင်ချေးများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ.ချုပ်။ ဘိုးဘွားရိပ်သာနယ်မြေ)
July 8, 2011 at 12:05 PM Reply
ပြည်သူ့ တပ်မတော်ခေတ်က ပြည်သူ့ တပ်မတော်သားတွေထဲမှာ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်နဲ့ ပြည်သူအတွက် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံပြီး ပေးဆပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စစ်ထဲ ဝင်ခဲ့ကြတာက အများစုမို့လို့ လေးစားထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။
ဒီနေ့ ဗိုလ်သင်တန်း တက်တဲ့ လူ အများစုကတော့ တခြား ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ မရနိုင်ပဲ မြန်မာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်မှာမှ ရနိုင်တဲ့ အခွင့်ထူးခံ ဘဝကို မျှော်ကိုးပြီး ဗိုလ်သင်တန်း လျှောက်ကြတာပါ။
မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက အလွန်အကျွံ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ နဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ တရားလွန် ကိုယ်ကျိုးရှာနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရနေတာကို အားကျပြီး အဲဒီလို ဖြစ်ချင်လို့ စစ်ထဲ ဝင်လာတာက အများစုပါ။
ပြည်သူ့ တပ်မတော်ခေတ်က ပြည်သူ့ တပ်မတော်သားတွေဟာ ခံယူချက် မှန်ကန်တော့ နေတာထိုင်တာ၊ ပြောတာဆိုတာ၊ ပြုမူတာကအစ ပြည်သူတွေ အထင်ကြီး လေးစားစရာ၊ အားကျ အတုယူစရာ သားကောင်းစစ်သည်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ စစ်ဗိုလ် အများစုက ခံယူချက် မမှန်ကန်တော့ မျိုးစေ့ မမှန်တော့ အပင် မသန်ပါဘူး။ ဒီနေ့ စစ်ဗိုလ် အများစုက ပြည်သူတွေကို မတရား ဖိနှိပ် အနိုင်ကျင့်ပြီး ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာငွေကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စစ်ထဲ ဝင်လာကြတာတာ ဆိုတော့ လက်ရှိ ပြည်သူကို မတရား အနိုင်ကျင့် ဖိနှိပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာနေတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို နမူနာယူပြီး အရပ်သားတွေကို ဖိနှိပ် ဆက်ဆံတဲ့ အကျင့်ကို ဗိုလ်လောင်းဘဝကတဲက စတင် အတုယူနေကြပါပြီ။ အဲဒီတော့ ရာထူးလေး နည်းနည်း ရလာပြီ ဆိုတာနဲ့ ပြည်သူကို ဖိနှိပ်ချင်တဲ့ သဘောထားက သူတို့ရဲ့ နေတာထိုင်တာ၊ ပြောတာဆိုတာ၊ ပြုမူတာမှာ ပေါ်လွင်သထက် ပိုမို ပေါ်လွင်လာတော့တာပေါ့။
ဒီနေ့ စစ်ဗိုလ် အများစုက ပြည်သူတွေကို မတရား ဖိနှိပ် အနိုင်ကျင့်ပြီး ပြည်သူ့ ငွေကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စစ်ထဲ ဝင်လာကြတာတာ ဆိုတော့ လက်ရှိ ပြည်သူကို မတရား အနိုင်ကျင့် ဖိနှိပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာနေတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သရုပ်မှန်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်သာအောင် ရေးသားဖော်ပြပြီး အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ဝေဖန်တဲ့ မငယ်နိုင် အပါအဝင် ပြည်သူတွေကို ရန်သူလို့ မြင်ပြီး ရန်ရှာနေတာပါ။
ပြည်သူ့ တပ်မတော်ခေတ်က ပြည်သူ့ တပ်မတော်သား စစ်စစ် တယောက်ရဲ့ သမီး မငယ်နိုင်က စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ရေး တိုက်ပွဲမှာ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ တောက်ရှောက် ပါဝင်လာလို့ လေးစားပါတယ်။
July 18, 2011 at 2:04 PM Reply
၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖျက်ဆီးမှု၌ ဗိုလ်နေ၀င်း သရဲဘောကြောင်ပုံ (၁) says:
December 20, 2011 at 8:19 PM Reply
တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဖွဲ.စည်းကြောင်း၊ လူထု အကျိုးစီးပွားအတွက် တပ်မတော်က တာဝန်ယူကြောင်း ကြေငြာချက်များနှင့် အတူ အများပြည်သူတို့အား စီတန်းလမ်းလျှောက်၍ ဆန္ဒပြပွဲများ မပြုကြရန် မေတ္တာရပ်ခံချက် စာတိုကလေးများကို သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြ ပါရှိခဲ့လေသည်။ ဆန္ဒပြလျှင် အရေးယူမည်ဟုလည်း နောက်ဆက်တွဲ သတိပေးထားခဲ့၏။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းကြောင်း ကြေငြာချက်ကို ဆန့်ကျင်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာလေမည်ကို ဗိုလ်နေ၀င်းနှင့် စစ်ဗိုလ်ကြီးများ ကြောက်ရွံ.ကြသည်မှာ သိသာထင်ရှားသည်။
အိမ်စောင့်အစိုးရခေတ်တွင် ကိုကိုးကျွန်းအကျဉ်းထောင်ကြီးကို ဆောက်လုပ်ကာ ဒီမိကရေစီ ၀ါဒီများနှင့် ကွန်မြူနစ်ဟု ယူဆသူများအား ဒလကြမ်း ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့သည့် သင်ခမ်းစာ ရှိသဖြင့် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိစေကာမူ စစ်အစိုးရ အလိုမရှိကြောင်း ကန့်ကွက်စာတမ်းများသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ စတင်၍ မြောက်များစွာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ လူငယ်တပ်ဦး နှင့် မဟာမိတ် အဖွဲ.၊ ရခိုင်သံဃတပ်ဦး၊ ရခိုင်သောတုဇနအဖွဲ.ချုပ် စသောအဖွဲ.အများက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်စာများ ထုတ်ပြန်ကြသဖြင့် အစိုးရ သစ်၏ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနအဖို့ ပထမလုပ်ငန်းအဖြစ် ဆန့်ကျင်စာတမ်းများကို လိုက်လံ သိမ်းဆည်းနေရသည်။ လက်ဝဲနိုင်ငံရေးပါတီကြီး ဖြစ်သော ဗမာပြည်အလုပ်သမားပါတီက စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ "လူထုဆန္ဒနည်း မပါပဲ စစ်တပ်နည်းသက်သက်ဖြင့် အာဏာသိမ်းနည်းကို ယေဘူယျအားဖြင့် ပါတီက မနှစ်သက်ကြောင်း" ဟု ဆန့်ကျင်ကြောင်း၊ လက်မခံကြောင်း ကြေငြာ၏။
ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ကြေငြာသော အဖွဲ.အစည်းများမှာ ကျောင်းသားအဖွဲ.အစည်းများ ဖြစ်ကြသည်။ တက္ကသိုလ် တပ်ဦးသစ်၊ ရန်ကုန်ခရိုင်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂတို့က စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခြင်းကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လက်မခံနိုင်ကြောင်း ကြေငြာကြသည်။ ကြောငြာချက်နှင့်အညီ စစ်တပ်အစိုးရအား ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကြသဖြင့် တော်လှန်ရေး အစိုးရနှင့် ထိပ်တိုက် တွေ.ကြရလေသည်။
တပြည်လုံးရှိ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသည် စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး အစည်းအဝေးများကို မတ်လဆန်းကပင် ကျင်းပ၍ ဆန္ဒပြကြသဖြင့် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင်များက ကျောင်းဆောင်များအတွက် စည်းကမ်းသစ် အမိန့်များကို ထုတ်ပြန်သောအခါ လှုပ်ရှားမှုများမှာ ပိုမို ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဂျူလိုင် ၃ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ "စည်းကမ်းသစ်ကို အလိုမရှိ" ဟုကြွေးကြော်သံများကို အော်ဟစ်သော ရန်ကုန်ကျောင်းသားများသည် တက္ကသိုလ် ပရ၀ုဏ် ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသများသို့ လှည့်လည်ဆန္ဒ ပြကြသည်။
ဂျူလိုင် ၅ ရက်နေ့တွင် ကမာရွတ် ရဲဌာနာရှေ.တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းဆန္ဒပြကြသည့် ကျောင်းသားများကို ရဲတို့က သေနတ်နှင့် ပစ်ခတ် လူစုခွဲကြသည်။ ကျောင်းသားတဦး ဒဏ်ရာရရှိသဖြင့် ဆေးရုံသို့ ပို့ရသောအခါတွင် လှုပ်ရှားမှု ပြင်းထန်လာခဲ့တော့၏။ ဂျူလိုင် ၆ ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့အထိ ကျောင်းသားများသည် တက္ကသိုလ် ပရ၀ုဏ် တခုလုံးမှ တံခါးများကို သော့ခတ်ပိတ်ဆို့ ပြီး "ဒီမီုကရေစီ ခံတပ်ကြီး" ဟု ဆိုင်းဘုတ်များ တင်ကာ ဒီမီုကရေစီ တရားပွဲများကို အသံချဲ.စက်နှင့် ဟောပြောကြသည်။
၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖျက်ဆီးမှု၌ ဗိုလ်နေ၀င်း သရဲဘောကြောင်ပုံ (၂) says:
မကျေမနပ် ဖြစ်နေသော ကျောင်းသားများသည် စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးကို အမျိုးမျိုး ဟောပြောနေကြရာ "တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင် ဗိုလ်မှုးကြီးများသည် ၃ ယောက်ပေါင်း ၇ တန်းသာ အောင်သူများ ဖြစ်ကြသည်" စသည်ဖြင့် စိတ်တွင်းရှိသမျှ ဟောပြောကြလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် တက္ကသိုလ်တ၀ိုက်တွင် တာဝန်ချထားသည့် ရဲအဖွဲ.ကို ရုပ်သိမ်းကာ စစ်သားများကို တပ်စွဲထားလေပြီ၊ စစ်ကားတစင်းတွင် အသံဖမ်းစက်တခု တပ်ဆင်ထားသည်။
ထိုအသံဖမ်းစက်က ကျောင်းသားတို့က အသံချဲ.စက်မှ ဟောပြောသမျှကို ဗိုလ်နေ၀င်း၏ အိမ်တော်သို့ တိုက်ရိုက် အသံလွှင့်ပေးရသည်။ ဂျူလိုင် ၇ ရက်နေ့တွင်မူ ပြင်းထံစွာ ဟောပြောသော ကျောင်းသားများ၏ ဟောပြောချက်များကို နားမခံနိုင်သဖြင့် ဒေါသအမျက် ချောင်းချောင်းထွက်ကာ စစ်တပ်က ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ရန် ဗိုလ်နေ၀င်းက ကြိုးမဲ့အသံလွှင့်စကားဖြင့် ကိုယ်တိုင် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်တ၀ိုက် တပ်စွဲထားသော စစ်တပ်များကို ကွပ်ကဲသူ ဒုတိယဗိုလ်မူးကြီး စိန်လွင်က တပ်သားများအား အဆင့်ဆင့် အမိန့်ပေးသဖြင့် လက်နက်မပါပဲ မိမိတို့ အဆောင်တွင်း၌ ဆန္ဒပြကြသည့် ကျောင်းသားများကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒပြရာတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့် အဆောင်နေ ကျောင်းသား အများတို့ကိုပါ တွေ.ရာသင်္ချိုင်း ဓားမဆိုင်း ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ကြသည်။ စစ်သားတို့သည် ဂျီသရီး သေနတ်သစ်များကို ပထမ စတင် အသုံးပြုကာ လက်တည့်စမ်း သတ်ဖြတ်ကြသည်။
ထိုသေနတ်သစ်များမှာ အနောက်ဂျာမဏီမှ ပစ္စည်းကိရိယာများကို ရန်ကုန်တွင် တပ်ဆင်သည်။ ဂျီသရီး သေနတ်သစ်များကို အာဏာသိမ်းစဉ်က တပ်အချို.သို့ ထုတ်ပေးခဲ့ရာ၌ ခုခံမှု မရှိသဖြင့် အသုံးမပြုခဲ့ရပေ။ ထိုလက်နက်သစ်များကို စမ်းသတ်ရန် လက်ယားနေသူ ဗိုလ်နေ၀င်းအဖို့ အခွင့်အရေး ရရှိသွားတော့သည်။ ကျောင်းသား ၁၅ ဦး သေဆုံးပြီး ၂၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု အစိုးရက ကြေငြာ၏။ သေစာရင်း အမှန်မှာ ကျောင်းသား ၁၀၀ ကျော် ရှိသည်။
၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖျက်ဆီးမှု၌ ဗိုလ်နေ၀င်း သရဲဘောကြောင်ပုံ (၃) says:
December 20, 2011 at 8:24 PM Reply
ကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ပွဲ ပြီးသောအခါ တကသ အဆောက်အဦကို စစ်တပ်က ၀ိုင်းထားပြန်၏။ တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ အဆောက်အဦကြီးသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် အဆောက်အဦကြီး ဖြစ်သည်သာမက မြန့်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင် နယ်ချဲ.ဆန့်ကျင်ရေး ခံတပ်ကြီးအဖြစ် လူထုက အမွန်အမြတ် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဗိမာန်ကြီး ဖြစ်သည်။
၁၉၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ သပိတ်မှ စတင်ကာ နိုးကြားလာသည့် မြန်မာလူထုကို ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များက နယ်ချဲ.ဆန့်ကျင်ရေး တိုက်ပွဲများဆီသို့ ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂကို ၁၉၂၇ ခုနှစ်က ဖွဲ.စည်းခဲ့သည်။ သမဂ္ဂအဆောက်အဦကို မျိုးချစ်မြန်မာ သဌေး ဦးညိုက တည်ဆောက် လှူဒါန်းသည်။
တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ အဆောက်အဦကို ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ကျမ္မာရေး ကိစ္စများကို အသုံးပြုရန် ဦးတည်သဖြင့် အင်္ဂလိပ် တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်များကပင် အားပေးခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားများက စကားရည်လုပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ အိန္ဒိယပြည်နှင့် ခွဲရေး၊ တွဲရေးပြဿနာ ပေါ်လာသောအခါ သမဂ္ဂ ခန်းမဆောင်မှာ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ၏ စကားစစ်ထိုးရာ ဗိမာန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဦးဘဖေ၊ ဒေါက်တာဗမော် စသော ခေါင်းဆောင်များသည် တကသ ခန်းမမှာ ဟောပြောကြရင်း စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
နောက်ပိုင်း တကသ အသင်းကို ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကိုနု၊ ကိုအောင်ဆန်း၊ ကိုကျော်ငြိမ်း၊ ကိုသိန်းဖေနှင့် ကိုရာရှစ်တို့ တက်လာချိန်မှ စတင်ပြီး နယ်ချဲ. တိုက်ပွဲ စစ်မြေပြင်၏ ခံတပ် အဆောက်အဦးကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံမှ အင်္ဂလိပ်တို့အား လက်နှက်နှင့် တိုက်ခိုက်နှင်ထုတ်မှု အထိ အရှိန်အဟုန် ပြင်းထံခဲ့သဖြင့် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲများ၏ အောင်ဗိမာန်ကြီးအဖြစ် မြန်မာတမျိုးသားလုံးက ဂုဏ်ယူခဲ့ကြသည်။
ဗိုလ်နေ၀င်း တက္ကသိုလ် ရောက်ရှိချိန်တွင် တကသ လှုပ်ရှားမှုများ ကြီးစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ကျောင်းသားများ၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းမပြုပဲ ကျောခိုင်းနေခဲ့သည်။ "ပြောကြ၊ ဟောကြတာတွက လေကုန်သည်၊ သူ့အဖို့ လည်ပတ်၊ ဘောလုံးကစားရန်ပင် အချိန်မလောက်၊ သူ့လမ်းနှင့်သူ မှန်မှန် ချီတက်လျှက် ရှိခဲ့ပေသည်" ဟု ဒေါက်တာမောင်မောင် ရေးသည့် ဗိုလ်နေ၀င်း အတ္ထုပတ္တိစာအုပ်ကြီးတွင် ဗိုလ်နေ၀င်းက ပြောခဲ့သည်။
ဤ တကသ အဆောက်အဦကြီးမှ ကိုနု၊ ကိုအောင်ဆန်းတို့ လူငယ်တစု နိုင်ငံက ကိုးစားသော ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ခဲ့သည်ကို ဗိုလ်နေ၀င်းက အမြဲ မနာလိုဖြစ်နေခဲ့သည်။ နယ်ချဲ.တော်လှန်ရေး အရေးတော်ပုံကြီး၌ ဗိုလ်နေ၀င်း မပါခဲ့သောကြောင့် မကျေမနပ် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင် တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ အဆောက်အဦကြီးကို ဗိုလ်နေ၀င်း မကြည့်လို။
၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖျက်ဆီးမှု၌ ဗိုလ်နေ၀င်း သရဲဘောကြောင်ပုံ (၄) says:
December 20, 2011 at 8:25 PM Reply
ထို့ပြင် ဂျူလိုင် ၇ ရက်နေ့က ကျောင်းသားများကို ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်စဉ်က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ သေဆုံးခြင်း မရှိ၊ အချို.မှာ ဖမ်းဆီး၍ပင် မမိသေးပဲ တကသ အဆောက်အဦ မျက်နှာကြက်တွင် ပုံးအောင်းနေသည်ဆိုသော သတင်းကို ဗိုလ်နေ၀င်း သိရှိသောအခါ တကသ ခေါင်းဆောင် မှန်သမျှကို သတ်ဖြတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တကသ အဆောက်အဦကြီးကိုပါ အပြီးအပြတ် ဖျက်ဆီးရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပြန်သည်။ သမဂ္ဂရုံးကို ဖြိုပြီးနောက် ဗိုလ်နေ၀င်း ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သော တော်လှန်ရေးကောင်စီက "ကျောင်းသားများ၏ စည်းကမ်းမဲ့ဘ၀ကို ပြင်ရမည့်တာဝန်သည် မိမိတို့အပေါ်တွင် ကျရောက်နေသဖြင့် တပ်မတော်၏အင်အား တစိတ်တဒေသကို သုံး၍ ဖြေရှင်းလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်" ဟုကြေငြာခဲ့၏။ ထိုကြေငြာချက်မှာ စစ်တပ်ကို အံတုကြလျှင် ယခုထက် ကြီးမားသော လက်နက်အင်အားနှင့် ဖြေရှင်းမည်ဟု ရာဇသံပေးသည့် သဘော သက်ဝင်၏။
ထိုမျှမကသေး၊ တကသ အဆောက်အဦကို ဖျက်ပြီးနောက် ဗိုလ်နေ၀င်းက လူထုအား အသံလွှင့် မိန့်ခွန်းပေးရာတွင် သူ သတ်ဖြတ်လိုက်သော ကျောင်းသားငယ်ကလေးများသည် လက်နက်ဟူ၍ အပ်တို တချောင်းမှ မရှိကြသည်ကို ဗိုလ်နေ၀င်း သိပါလျက်နှင့် လက်နက်ကိုင်သူပုန်အဖွဲ.ကြီးများကို ရင်ဆိုင်နေသည့်သဖွယ် ပုံကြီးချဲ.၍ "ဓားကို ဓားခြင်း၊ လှံကိုလှံခြင်း ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်" ဟု ဒေါသဟုန် ဒေါသသံနှင့် အသံလွှင့်၍ ပြောခဲ့ပြန်သည်။
ဗိုလ်နေ၀င်း နှင့် စစ်ဗိုလ်ကြီး တစုသည် ဂျူလိုင် ၇ ရက်နေ့က ကျောင်းသားများကို သတ်ဖြတ်မှုကြီးနှင့် နိုင်ငံက အမွန်အမြတ်ထားသည့် တကသ အဆောက်အဦကြီးကို ဗုံးခွဲ ဖျက်ဆီးမှုကြီး တို့ကို ဒေါသမွှန်သဖြင့် စိတ်လိုက်မာန်ပါ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းသည် သူတို့၏ စစ်တပ်အဖို့ မတရားကြီးမားသော ရာဇ၀တ်မှုကြီး ဖြစ်နေသည်ကို စဉ်းစားမိကြသည်။ နူးညံ့ သိမ်မွေ.သော လိပ်ပြာကလေးကို အမြောက် နှင့် ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်သကဲ့သို့ ရာဇ၀င်ရိုင်းနေသည်ကို တစိမ့်စိမ့် တွေးတော၍ မြင်တွေ.မိကြသောအခါ တနေ့တွင် လူထုက ဒဏ်ခတ်လေမည်ကို ကြောက်သွေးဖြာလာကြသည်။
မတရားမှုကျူးလွန်ခဲ့သော ရာဇ၀တ်မှုကြီးအတွက် တစိမ့်စိမ့် ကြောက်ဒူး တုန်လာကြသောအခါတွင် "တရားခံသည် မိမိ မဟုတ်ပါ" ဟု တဦးကို တဦးက လက်ညှိုးထိုး၍ အပြစ်ဖို့ရင်း မိမိ အပြစ်မရှိကြောင်း ထုချေမှုများကို အကြိမ်ကြိမ် ပြုကြသည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းနှင့် ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဗိုလ်မူးချုပ် အောင်ကြီးတို့သည် တဦးကိုတဦး တရားခံဖြစ်လေဟန် ဖော်ကောင်လုပ်ကြသည်။ ဗမာ့တပ်မတော်ကြီး၏ ထိပ်သီးကြီးများသည် သာမန် သူခိုး၊ လူဆိုးအဖွဲ.ကလေးမျှပင် ညီညွတ်မှု မရှိ၊ အမှားကို ၀န်ခံရန် သတ္တိတစက်မှ မရှိသည့် သူရဲဘောကြောင်သူများ ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်လာတော့သည်။
၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖျက်ဆီးမှု၌ ဗိုလ်နေ၀င်း သရဲဘောကြောင်ပုံ (၅) says:
ထိုစဉ်က ဒုတိယကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူ အောင်ကြီးက "တကယ် အမိန့်ပေးတဲ့ စာ ယူလာပြီး မရမ်းကုန်းကို ပေးလာသူက ဗိုလ်သန်းစိန် ဖြစ်ပါတယ်။ သမဂ္ဂ ဖြိုဖို့ ဒိုင်းနမိုက်တွေ ဂျီအီးဖိုး အင်ဂျင်နီယာ တပ်ခွဲကို မှာယူ၊ အဲဒီမှာ မလုံလောက်လို့ စီအိုဒီ ပင်မစစ် ပစ္စည်းသိုလှောင်ရေး သွားယူခိုင်းသူဟာ ဗိုလ်ကျော်စီုးပါ။ စီအိုဒီ တပ်မှူး ဗိုလ်ဝင်းကို လိုက်ရှာပြီး အင်းတိုင်ကို သွားရောက် ယူရတာပါ။ ခွဲဖို့ အမိန့်ပေးသူတွေဟာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ကျော်စိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် ဒိုင်းနမိုက်တွေ ဆင်ရတဲ့ တပ်က အင်ဂျင်နီယာတပ် ဗိုလ်မှူးထွန်းရီ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံး ဒိုင်းနမိုက်တွေ ဆင်ရတာဟာ နံနက်လင်းအားကြီးမှ ဖြစ်ပါတယ်၊ လက်မှတ်ထိုးမည့် အရာရှိ ကြီးကြီးမားမား မရှိလို့ ဒုက္ခရောက်နေတုန်း လမ်းလျှောက်ရင်း ရောက်လာတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းသိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းသိန်းက၀င်ပြီး ခွဲတဲ့အမိန့်ကို လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ ဗိုလ်ထွန်းရီ က ပြောလို့ ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းသိန်းက လက်မှတ်ဝင်ထိုးပြီး ဒိုင်းနမိုက် ခွဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားခံ ဖြစ်ရှာတဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြီး ဆိုသူဟာ ဗိုလ်မှူးကြီးလှဟန်နှင့် ဗိုလ်ချုပ် အိမ်လိုက်အသွား ပါမောက္ခချုပ် ဆရာကြီး ဦးကာ ကို ဗိုလ်လှဟန်က `သမဂ္ဂဖြိုဖို့ အမိန့်ရတယ်´ လို့ ပြောတာ ထပ်ကြားရတော့ အရဲစွန့်ပြီး ဗိုလ်ကျော်စိုး ရှိရာ အသံလွှင့်ရုံကို တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီး `အဲ့ဒီကိစ္စကိုရပ်ထားပေးပါ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကို ကျွန်တော်ပြောပါမယ်´ ဆိုပြီး ဟိုရောက်တော့လဲ ဘာမှ မပြောဘဲ မလိမ့်တပတ်နည်းနဲ့ ထားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် " ဟု အောင်ကြီး၏ စာတမ်းတွင် ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ရေးသားကာ ဖြေရှင်းသည်။
၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖျက်ဆီးမှု၌ ဗိုလ်နေ၀င်း သရဲဘောကြောင်ပုံ (၆) says:
December 20, 2011 at 8:30 PM Reply
ဗိုလ်နေ၀င်းက တဖန် အကြီမ်ကြိမ် ဖြေရှင်းသည်။ သူ၏ နောက်ဆုံးနေ့ လူထုက လက်မခံတော့သဖြင့် မဆလ ဥက္ကဌကြီး ရာထူးမှ ထွက်ပေးရသောနေ့တွင်ပင် "လူစုလူဝေးရှေ.မှာ ကျွန်တော် စကားပြောတာ ယခုအကြိမ်ဟာ နောက်ဆုံး အကြိမ် ဖြစ်နိုင်တာမို့ ကျောင်းသားများက ကျွန်တော်နှင့် တော်လှန်ရေး ကောင်စီတဖွဲ.လုံးအပေါ် အထင်လွဲနေသည့် အဖြစ်အပျက်တခု တင်ပြပါရစေ" ဟု ပါတီညီလာခံမှ ထပ်မံ ရှင်းပြန်၏။ တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ အဆောက်အဦကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဂျုလိုင် ၈ ရက်နေ့နံနက်တွင် ဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ကို အများသိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ပထမ ဂျူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ညနေ ကျွန်တော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အပိုင်းကို ဖေါ်ပြမှ ပြည့်စုံမည်ဖြစ်၍ ဖေါ်ပြပါမည်။
ဂျူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် သေနတ်ပစ်သံ ကြား၍ ကျွန်တော်က တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဗိုလ်ကျော်စိုးကို အခြေအနေ မေးရာ ဆရာကြီး ဦးကာတို့မိသားစုအား ဘေးကင်းသည့် နေရာသို့ ပိုထားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပါသည်။ `ဆူပူသူ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းမိပြီလား´ ဟု မေးရာ မမိသေးကြောင်း၊ သမဂ္ဂအဆောက်အဦအတွင်းတွင် အချို.ရှိကြောင်း ပြောသဖြင့် ကျွန်တော်က ရဲများ၊ တပ်မတော်သားများ နောက်ထပ် အနာတရ မရှိရအောင် အောက်ပါအတိုင်း ညွန်ကြားပါသည်။
(က) သမဂ္ဂအဆောက်အဦ အတွင်းရှိ သူများကို အဆောက်အဦတွင်းမှ ထွက်ကာ အဖမ်းခံရန် အသံချဲ.စက်ဖြင့် ပြောရန်၊ ထွက်မလာပါက လက်နက်ကြီးများ သုံးမည် ဆိုသည့် အချက် ထဲ့ပြောရန်
(ခ) အသာတကြည် ထွက်၍ အဖမ်းမခံပါက ရီကွိုင်လက် ဂန်း ဖြင့် ပစ်ဖမ်းရန်၊ လိုအပ်ပါက ရီကွိုင်လက် ဂန်း သုံးရန်၊ အထက်ပါအချက်တို့ကို မမှောင်ခင် ပြီးအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာ ကျွန်တော် ပြောပါမယ်။ ဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီးရန်အတွက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့တွင် ကျွန်တော်နှင့်တကွ တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင် အချို.တို့ မပါခဲ့ပါ။ ဂျူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့ နံနက်တွင် ဗုံးကြီးကြီး တလုံး ပေါက်ကွဲသကဲ့သို့ အလွန်ပြင်းထန်သော မြည်ဟီးသံကြီး ကြားရသဖြင့် စုံစမ်းတော့မှ သမဂ္ဂအဆောက်အဦကို (ဒိုင်းနမိုင်း) တို့နှင့် ဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်း ကျွန်တော် သိရပါသည်။
အခြား တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင် အတော်များများလည်း ထိုပေါက်ကွဲသံ ကြားပြီးမှ သိကြရပါသည်။
သို့သော် အသံလွှင့်ရုံတွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီ အချို.တို့ဖြင့် ဖွဲ.စည်းထားသော လုံခြုံရေးကောင်စီအားလုံးနှင့် လုံခြုံရေးတာဝန် ယူရသော လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စိုး၊ ဗိုလ်မှူးကြီးလှဟန်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးစောမြင့်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးဘနီ၊ ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လွင် ရဲမင်းကြီး ဦးဘအေးတို့ ရောက်နေကြပါသည်။
ထို ဂျူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့ သမဂ္ဂအဆောက်အဦကို ဖြိုလိုက်ကြောင်း သိပြီးနောက် ဗိုလ်ကျော်စိုးကို ခေါ်၍မေးရာ `ဂျူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ ညနေက ကျွန်တော်က `သမဂ္ဂအတွင်း ၀င်ရောက်နေသည့် ဆူပူသူ ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးရာတွင် (လိုအပ်လျှင် ရီကွိုင်းလက် ဂန်းကို သုံးနိုင်သည်) ဆိုသည့် အချက်ကို (သမဂ္ဂအဆောက်အဦကို ဖျက်ခိုင်းသည်) ဟု ယူဆသဖြင့် ဖျက်လိုက်သည်´ ဟု ဖြေပါသည်။
"ဓား ဓားချင်း၊ လှံ လှံချင်း" ဆိုသည့် စကားလုံးများ ပါသည့် ကြေငြာချက်ကို အသံလွှင့်လိုက်ပါသည်။
၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖျက်ဆီးမှု၌ ဗိုလ်နေ၀င်း သရဲဘောကြောင်ပုံ (၇) says:
နောက် သုံးလေးလ ကြာပြီးနောက် ကျွန်တော် "အရက်မူးမူးနှင့် သမဂ္ဂအဆောက်အဦကို ဖျက်ဖို့ အမိန့်ပေးသည်" ဟု နိုင်ငံခြားသတင်းစာဆရာတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ပြောဆိုနေသည်ကို ကြားရ၍ ဗိုလ်ကျော်စိုးကို ကျွန်တော် အရက်မူးပြီး ဖျက်ဖို့ အမိန့်ပေးတယ် လို့ ကျွန်တော် တယောက်ထဲကို တရားခံ လုပ်ထားတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဂျူလိုင် ၇ ရက်နေ့က အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြခိုင်းပါသည်။ အဲ့ဒီတော့မှ ဗိုလ်ကျော်စိုးက အဖြစ်အပျက် အမှန်ကို ပြောပြပါတော့သည်။ အရင်က တော်လှန်ရေးကောင်စီ တက်ခါစတွင် စိတ်ဝမ်းကွဲကြတာတွေ မပေါ်အောင်လို့ ဗိုလ်ကျော်စိုးက ဖုံးဖုံးဖိဖိ ဖြေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဖြစ်အပျက် အမှန်မှာ ထို ဂျူလိုင် ၇ ရက်နေ့က အသံလွှင့်ရုံရှိလူစုထဲမှ တဦးတယောက်က ဖျက်ပစ်လျှင် ကောင်းမည်ဟု ပြောရာမှ ဖျက်သင့်၊ မဖျက်သင့်ကို ဆွေးနွေးကြပါသည်။ နောက်ဆုံး ဗိုလ်ချုပ်ကို အသိပေးပြီး ဗိုလ်ချုပ် သဘောတူလျှင် ဖျက်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
ဗိုလ်အောင်ကြီးက ဗိုလ်ချုပ်ထံ သူသွားပြီး တင်ပြမည်၊ သဘောတူ၊ မတူ အဖြေကို သူ ယူခဲ့မည်ပြောပြီး ကိုလှဟန်ကို ခေါ်၍ ကားနှင့် ထွက်သွားပါသည်။
ထို့နောက် ဗိုလ်အောင်ကြီး အသံလွှင့်ရုံသို့ ပြန်လာပြီး `ဗိုလ်ချုပ်က သဘောတူလိုက်ပြီ´ ဟု ပြောသဖြင့် အသံလွင့်ရုံရှိ လူသိုက်တို့ သမဂ္ဂအဆောက်အဦကို ဖျက်ဖို့ ပစ္စည်းများ စုပြီး ဖျက်ပစ်လိုက်ပါသည်။
ထိုအဖြေကို ရပြီးနောက် ဗိုလ်အောင်ကြီး မပါပဲ ကျန်တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင်များကို ခေါ်၍ `ဗိုလ်အောင်ကြီး ကျွန်တော်ကို မတင်ပြပဲနှင့် ကျွန်တော်၏ သဘောကို မမေးပဲနှင့် အသံလွှင့်ရုံရှိ လူသိုက်ကို ကျွန်တော် သဘောတူလိုက်သည်ဟု ပြောသည့်´ အကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ............" ဟု ဗိုလ်နေ၀င်းက တိုင်းပြည်သို့ ရှင်းပြသည်။
ဗိုလ်နေ၀င်း၏ နောက်ဆုံးနေ့ မျက်ဖြေ လင်္ကာ စာတန်းကြီးမှာ ကာရန်မပါ စာသားမချောပါ။ အဖြစ်မှန်ကို ကိုယ်တွေ.မျက်မြင် သိရှိခဲ့သော သတင်းထောက်များအဖို့ ဗိုလ်နေ၀င်း၏ စာရှည်ကြီးကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ ဖတ်ပြီး ဗိုလ်နေ၀င်း၊ ဗိုလ်အောင်ကြီးနှင့် တော်လှန်ရေးကောင်စီဝင် စစ်ဗိုလ်ကြီးများသည် လမ်းကြိုလမ်းကြားမှ ခါးပိုက်နှိုက်အဖွဲ.၏ အဆင့်ပင် မရှိ။ အရေးကြုံက မိမိ ကိုယ်လွတ်ရုံးကာ လွယ်ကူစွာ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ကို တရားခံဟု လက်ညှိုးထိုး၍ ဖေါ်ကောင်လုပ်ကြသည်ကို သိသာထင်ရှားစွာ မြင်တွေ.ကြရပေသည်။
၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖျက်ဆီးမှု၌ ဗိုလ်နေ၀င်း သရဲဘောကြောင်ပုံ (၈) says:
ဂျူလိုင် ၇ ရက် သွေးချောင်းစီး လူသတ်ပွဲကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ --
(က) ဗိုလ်နေ၀င်းက `စောစောက မသိ၊ သေနတ်သံကြားမှ သိရသည်´ ဟု ဖြေရှင်းခြင်းသည် လိမ်ညာသော မုသား ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားတို့ ဟောပြောချက်ကို သူ့ထံသို့ ကြိုးမဲ့ အသံလွှင့်ခွက်နှင့် လွှင့်ကြားပေးသောကြောင့် ကျောင်းသားများ၏ အသံကို စိတ်ဆိုးကာ သတ်ဖြတ်မိန့် ထုတ်သည်မှာ ဗိုလ်နေ၀င်း ကိုယ်တိုင် ဖြစ်သည်။
(ခ) ထိုစဉ်က တပ်ဦးမှ ပစ်မိန့်ပေးရသူ ဗိုလ်စိန်လွင်က `မိမိသည် ဗိုလ်နေ၀င်း၏ အမိန့်အရ ပစ်မိန့်ပေးခဲ့ပါသည်´ ဟု မဆလပါတီ ပျက်သောအခါတွင် ဖြေရှင်း ဖေါ်ထုတ်ခဲ့သည်။
(ဂ) ကျောင်းသားများ လက်ချက်နှင့် ရဲ ၇ ဦး၊ ၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသည် ဟု ဗိုလ်နေ၀င်းက ပြောသည်မှာလည်း လိမ်ညာသော မုသားဖြစ်သည်။ အဆောင်ဝင်းတံခါး မှန်သမျှကို ကျောင်းသားများက ပိတ်ထားခိုက် ပြင်ပရှိ စစ်တပ်က ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ချိန်တွင် တက္ကသိုလ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရဲတယောက်မှမရှိ၊ ကျောင်းသားတို့က ရဲတို့အား ရန်ပြုရန် မဖြစ်နိုင်။
(ဃ) တကသ အဆောက်အဦ မျက်နှာကြက်တွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို သတ်ဖြတ်ရန် ဦးတည်ချက်ဖြင့် `အဆောက်အဦကြီးကို ဖျက်စေ´ အမိန့်ပေးသူမှာ ဗိုလ်နေ၀င်း ဖြစ်သည်။ မဖျက်ရန် ဟန့်တားလေဟန် ပြောသော ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်အောင်ကြီးလည်း တာဝန်ရှိသည်။
(င) တကသ ကို ဖျက်ဆီးပြီး နောက်တနေ့ နံနက် ဘာကြောင့် ဖျက်ရသည်ဟု တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ကြေငြာချက်တွင် `တော်လှန်ရေးကောင်စီသည် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဘ၀ကို ပြင်ရမည့် တာဝန်သည် မိမိတို့ အပေါ်တွင် ကျရောက်နေသဖြင့် တပ်မတော်၏ အား တစိတ် တဒေသကို သုံး၍ ဖြေရှင်းလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်´ ဟု သတင်းစာတို့မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလျှက် တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌက `မိမိ မသိပါ၊ မိမိ ပါဝင်ခြင်း မရှိပါ´ ဟု ပြောသည်မှာလည်း မဟုတ်မမှန်သော မုသားဟု ထင်ရှားသည်။
(စ) `ယခုဖြစ်ပျက်သည့် ကိစ္စသည် ကျောင်းသားကိစ္စ တခုတည်း မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံရေး အမှောင့်ပရောဂ ဖမ်းစားတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ရိပ်စားမိပါတယ်´ ဟု ဗိုလ်နေ၀င်း၏ သမဂ္ဂဖျက်ရကြောင်း ကိုယ်တိုင် အသံလွှင့်ချက်၌ ကျောင်းသားတို့နောက်မှ ဗကပ တို့ ပါလေဟန် ပြောသည်မှာလည်း လိမ်ညာလီဆယ်ချက် ဖြစ်သည်၊ ထိုအချိန်က ဗိုလ်နေ၀င်းက မြို.ပေါ်ရှိလက်နက်ချ ဗကပ များကို သိမ်းသွင်းကာ တောတွင်းရှိ ဗကပ များ အလင်းဝင်ရန် စကားကမ်းလှမ်းနေချိန် ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားတို့ လှုပ်ရှားမှုသည် ပြင်ပ ပယောဂ မပါသည်ကို သိပါလျှက် သတ်ဖြတ်မှုကြီး နှင့် ဖျက်ဆီးမှုကြီးကို လူထုက လက်ခံအောင် လီဆယ်ပြောဆိုချက်သာ ဖြစ်သည်။
၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖျက်ဆီးမှု၌ ဗိုလ်နေ၀င်း သရဲဘောကြောင်ပုံ (၉) says:
(ဆ) ကျောင်းသားများအား သတ်ဖြတ်ပြီးနောက် "ကျွန်တော်တို့ကို အပြောဘ၀မှာ နစ်မွန်းစေခြင်းအားဖြင့် အလုပ်ပျက်ကွက်အောင် ရည်စူးပြီး တမင်လုပ်နေကြတယ် ဆိုလျှင်တော့ ကျွန်တော် နောက်ထပ် ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး၊ အနည်းဆုံး ဓားကို ဓားချင်း၊ လှံကို လှံချင်း ဆိုင်ဘို့သာ ရှိပါတော့တယ်" ဟုပြောသည်မှာ ဒေါသသံနှင့် တုံရီနေသည်ကို ကြားရသူ လူထုက သိရှိ နားလည်ကြသည်။ ဗိုလ်နေ၀င်း ရာထူးမှ ဆင်းပေးရသော ၈၈ ခုနှစ်က `စစ်တပ်ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင်ပစ်သည်။ မိုးပေါ်ထောင်ပြီး ဖေါက်တာမပါဘူး၊ နောင်ကို ဆူဆူပူပူ လုပ်တဲ့သူတွေတော့ မသက်သာဘူးလို့သာ မှတ်ပေတော့´ ဟု ပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှာ အသံ တမျိုးတည်း ရှိသည်ကို လူထုက သတိရကြသည်။
(ည) ထိုစဉ်က လက်တွေ. သတ်ဖြတ် ရုံမျှမက နှုတ်မှလည်း စစ်ကြေငြာခဲ့ပါလျှက် နောက်ပိုင်းမှ သူသတ်သည်၊ ငါသတ်သည်၊ သူဖျက်သည်၊ ငါဖျက်သည် ဟု တဦးကို တဦးက လက်ညှိုးထိုး၍ ဖေါ်ကောင်လုပ်ကြစေကာမူ၊ ခေါင်းရှောင်ကြစေကာမူ ဗိုလ်နေ၀င်းသည် အဓိကတရားခံ ဖြစ်သည်ကို လူထုက မေ့မရနိုင်ပေ။
ဤအချက်များကို ထောက်ရှု၍ တပ်မတော်ကြီးကို ဦးစီးကြသော ဗိုလ်နေ၀င်းနှင့် စစ်ဗိုလ်ကြီးများသည် ဘိန်းစား ခါးပိုက်နှိက် အဖွဲ.၀င်တို့မျှပင် သတ္တိမရှိဘဲ လွန်စွာ သူရဲဘောကြောင်ကြသည် ကို သိသာထင်ရှားစွာ မြင်သိနိုင်ကြပေသည်။
ဗိုလ်နေ၀င်း နှင့် စစ်ဗိုလ်တစုသည် အင်္ဂလိပ် နယ်ချဲ.ကို တိုက်ခဲ့သော ကျောင်းသား နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် သူတို့ ပါဝင်ခဲ့ခြင်း မရှိသဖြင့် ကျောင်းသားများ၏ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ ကဏ္ဍကို သမိုင်းမှ ဖျောက်လိုကြသည်။
သမဂ္ဂအဆောက်အဦကို အယူသီး ဘာသာခြားတဦး အခြားဘာသာ အဆောက်အဦကို မမြင်လိုကြသကဲ့သို့ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ သမဂ္ဂ၌ ပုန်းနေကြသည်ဟု သတင်းရသဖြင့် သတ်ဖြတ်ရန် သွေးဆာနေသောကြောင့် ဖျက်ဆီးကြသည်။
၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖျက်ဆီးမှု၌ ဗိုလ်နေ၀င်း သရဲဘောကြောင်ပုံ (၁၀) says:
December 20, 2011 at 8:38 PM Reply
နိုင်ငံ တည်စမှ စတင်ပြီး တပ်မတော်သည် ဗိုလ်နေ၀င်း၊ ဗိုလ်အောင်ကြီး တို့ကဲ့သို့ သူရဲဘောကြောင်ပြီး ဗိုလ်နေ၀င်းနှယ် လောဘရမက် လွန်ကဲသူတို့၏ လက်တွင်းသို့ ကျရောက်ရသည်မှာ နိုင်ငံ၏ ကံကြမ္မာသာ ဖြစ်ချေတော့၏။ ဗိုလ်နေ၀င်းသည် လူသတ်ပွဲကြီး အပြီးတွင် ခေါင်းရှုတ်သဖြင့် အပန်းဖြေဦးမည်ဟု ဆိုကာ ဥရောပသို့ ဂျူလိုင် ၉ ရက်နေ့က အပန်းဖြေခရီး ထွက်သောအခါ ဗိုလ်အောင်ကြီးအား တိုင်းပြည်ကို အပ်၍ မင်းပဲကြည့်လုပ်တော့ကွာ ဟု တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဥရောပသွား ဗိုလ်နေ၀င်းည် အမှန်တကယ် အပန်းဖြေသွားသည် ဖြစ်၏။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြင်းပွဲများ ကျင်းပခြင်းမပြုရ ဟု တော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဌ အာဏာဖြင့် ဗိုလ်နေ၀င်း ကိုယ်တိုင် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဗိုလ်နေ၀င်းသည် ငယ်စဉ်ကပင် လောင်းကစား ၀ါသနာထုံခဲ့သောကြောင့် လောင်းကစားပွဲ မသွားရသဖြင့် ပျင်းရိ ငြီးငွေ.စေသည်။ အပန်းဖြေခရီး ကို အင်္ဂလန်ပြည်၊ လန်ဒန်မြို.သို့သွားကာ မြင်းပြိုင်ပဲ ခွေးပြိုင်ပွဲများသို့ သွားရောက် လောင်းကစားခြင်းဖြင့် အပန်းဖြေခဲ့သည်။ ထိုခရီးပြီး နောက်နှစ်များတွင် တနှစ်လျှင် ငါး ကြီမ်နှုန်းခန့် ဥရောပသို့သွားကာ လောင်းကစားပွဲများ အပန်းဖြေလေ့ရှိခဲ့သည်။
ကျောင်းသားများကို သတ်ဖြတ်၍ တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂကို ဖျက်ဆီးပြီး ဥရောပသို့ အပန်းဖြေ မထွက်မှီကလေးတွင် ဗိုလ်နေ၀င်းက ကျောင်းသားများအား မအေ၊ နှမ ရိုင်းစိုင်းစွာ ဆဲဆိုကာ အမိန့်ပေးခဲ့သေးသည်။ ဗိုလ်နေ၀င်းက "မအေ --ိုး တွေ ၊ ကျောင်းမတက်ကြစေနဲ့၊ တက္ကသိုလ်အားလုံး ပိတ်ထား......." ဟု သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်း မစာမနာ အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်နေ၀င်း၏ခေတ် တလျှောက်လုံး ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ပေါ်တိုင်း တက္ကသိုလ်များကို နှစ်ရှည်လများ ပိတ်ရန် အမိန့်ထုတ်လေ့ ရှိရာ ဗိုလ်နေ၀င်း၏တပည့် စစ်အစိုးရများကလည်း ထိုလမ်းစဉ်ကို ဆက်လက် ကျင့်သုံးကြသဖြင့် စစ်အစိုးရများခေတ်၌ ပေါက်ဖွားသည့် မြန်မာလူငယ်များ အထက်တန်းပညာ မတတ်ကြပဲ လူညွန့်တုံးကြရရှာလေသည်။
Credit / ကိုရဲသူရိန်မင်း
(ဧရာဝတီဘလော့မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)